March 2013 | ကမ်းလက်
တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ (10,000 Auto Parts )
in ဇင်ဝေသော်, တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ - on 3/31/2013 - No comments
ကလေးအဖေလောင်း သုံးယောက်ဟာ သားဖွားခန်းရှေ့မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ သတင်းထိုင်စောင့်နေကြတယ်။ ခဏနေတော့ နာ့စ်မလေးက ထွက်လာပြီး ပထမလူကို ဂုဏ်ပြုစကားပြောတယ်
" ဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်၊ ရှင်ဟာ ကလေးအမွှာပူးလေးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သွားပါပြီ " ဒီတော့ အဲဒီ ကလေးအဖေက
" တိုက်ဆိုင်လိုက်တာဗျာ၊ ကျနော် အလုပ်လုပ်နေတာကလည်း Twin Towers Bank မှာပါ၊ ကျေးဇူးပါဗျာ "
ခဏနေတော့ နာ့စ်မလေး ထွက်လာပြန်ပြီး ဒုတိယလူကို ဂုဏ်ပြု စကား ပြောပြန်တယ်
" ရှင့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်၊ ရှင်ဟာ ကလေး သုံးယောက်အမွှာရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သွားပါပြီ"
" တိုက်ပဲ တိုက်ဆိုင်လွန်းလှတယ်၊ ကျနော် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီက အေသုံးလုံး ( AAA ) လေ "
သူတို့ပြောသံတွေကြားပြီး တတိယလူက မျက်နှာ မသာမယာနဲ့ အပြင် ထွက် သွားတယ်။ နာ့စ်မလေးက
" ရှင် ဘယ်ထွက်သွားမလို့လဲ၊ စောင့်ဦးလေ " ဆိုတော့ အဲဒီလူက
" ကျနော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီက 10,000 Auto Parts တဲ့ဗျာ၊ ဒုက္ခပါပဲ " တဲ့။
(RD, Apr, 2005)
၅၃ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် ( ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို ချိန်တဲ့ ဓား )
in သီဟနာဒ, အမှတ်တရ - on 3/31/2013 - No comments
ကျောင်းတော်၏ သာသနာပြုခရီး ယနေ့ ၅၃ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီ။ ကျွန်ုပ်ထက် ၁၀ နှစ်ခန့် ကြီး၏။
သမိုင်းရှည်လျားသည့် နိုင်ငံများအတွက် ၅၃ နှစ်သည် မဆိုစလောက် သမိုင်းဖြစ်သော်လည်း မနေ့တနေ့က စင်္ကာပူအတွက် နည်းနည်းနောနော မဟုတ်။
ဒုတိယ ရှေးအကျဆုံး ထေရဝါဒကျောင်းဟု သမိုင်းက ဆိုသည်။ သီရိလင်္ကာ ရဟန်းတော်တို့ ပြည်ပသာသနာပြုခရီး ခြေစောသည်။
ထိုထက် လေးစားစရာကောင်းသည်က ထိုစဉ် စင်္ကာပူသည် လွတ်လပ်ရေး ပင်မရသေး။ ဤကျောင်းမြေနေရာသည် ရေဗွက်ထူထူ လယ်ကွက်သာ ရှိသေး၏။
ယနေ့ခေတ် ပြည်ပသာသာနာပြုဟု ဆိုကြရာ၌ ချမ်းသာသောနိုင်ငံကြီးများ သို့သာ သာသနာပြုတို့ ( မိမိအပါအဝင် ) အာရုံကျတတ်ရာ လယ်တောထဲ လာနေသွားသော ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည့် သီရိလင်္ကာ ဆရာတော်ကြီးအပေါ် ပို၍ အထင်ကြီးလေးစားမိ၏။ ကြည်ညိုမိ၏။
လယ်ကွက်ထဲမှာ သာသနာ စိုက်ခဲ့သည့် အရှင်။ ကျွန်ုပ်လက်ထက်မှာ ထို စိုက်ခင်းက ဂလိုဘယ်စီးတီး အမည်ပင် ခံယူစ ပြုနေလေပြီ။
" လွန်ခဲ့သည့် ၅၃ နှစ်က အခြေအနေမျိုးဆိုလျင် မင်း ဘယ်လောက် ကြာ ကြာနေမလဲ " ဟု ကိုယ်တိုင် မေးခွန်းထုတ်မိရာ ရှက်နိုးစွာဖြင့် ....
" ငါ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ဤကျောင်းတိုးတက်ဖို့ လုပ်နေတာပဲ " ဟု ထမင်းရည်ပူ လျှာလွှဲ ဖြေလိုက်မိ၏။
ဆေးလိပ်တစ်ဖွာနှင့် ဂျူရောင်း အိုင်းလန့်ဒ်
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 3/30/2013 - No comments
စင်္ကာပူအစိုးရနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကခုလ ၂၆ ရက်နေ့က ပန္နက်ချ၊ ဂရောင်း ဘရိတ်ကင်းပွဲအတွက် ဖိတ်ကြားလာသည်။ ထိုပွဲအတွက် ခရစ္စယန်၊ အစ္စလမ်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သုံးဘာသာစလုံးမှ ဘာသာရေးခေါင်းေ ဆာင်များကို ဖိတ်ကြားထားကြောင်း၊ မိမိတို့ ဘာသာတရားနှင့်အညီ ကုမ္ပ ဏီနှင့် အလုပ်သမားများ ဘေးရန်မရှိကြရန် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးစေ လိုကြောင်း ဦးစွာ ကြိုတင်လျှောက်ထားသည်။ (ထို ဂျူရောင်း အိုင်းလန့်ဒ်၏ ပထမ ဥပဒေသည် ဘေးရန်မရှိရေး ( ဆေ့ဖ်တီး ) ဖြစ်၏။)
သို့ ဆိုသဖြင့် ထိုကုမ္ပဏီရှယ်ယာပိုရှင်င်များ၊ အလုပ်သမားများတွင်လည်း ဘာသာဝင်အမျိုးမျိးရှိနေကြောင်း ပြောစရာမလိုတော့။
ဤ၌ ပထမ ကောက်ချက်ကို ဆွဲလိုက်သည်။
အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ဘာသာ၊ ယုံကြည်မှု တူနေ စရာ မလို။
ထိုကျွန်းငယ်လေးက စင်္ကာပူ၏ အနာဂတ်ဟုလည်းဆိုကြသည်၊ ဓာတ်ငွေ့ ၊ ရေနံ စသော ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ မိမိသွားခဲ့သော နေရာက ရှဲလ် ဂျူရောင်း အိုင်းလန့်ဒ်ဟုခေါ်သည်။ ရှဲလ် ရေနံကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်ဟုလည်း တွေးလို့ရသည်။
ထိုကျွန်းပေါ် မဝင်မီ ပထမဆုံး ချက်ပွိုင့်မှာ ပါလာသမျှ အိုင်ဒင်တတီ ကတ်ဒ် များ ချန်ထားခဲ့ရပြီး သူတို့ပေးလိုက်သော ကတ်ဒ်လေးကို ယူပြီး ခရီးဆက်ရ သည်။ နောက် တစ်နေရာ ရောက်သောအခါ ပါလာသော ထို ကတ်ဒ်လေးကို ချန်ထားခဲရပြန်ပြီး ဒုတိယချက်ပွိုင့်က ထပ်မံပေးလိုက်သော ကတ်ဒ်ကိုယူပြီး ခရီးဆက်ခဲ့ရပြန်သည်။
ထိုမှတဆင့် သွားရမည့်နေရာ မသွားမီ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ နေတတ်ရေး အတွက် ၁၀ မိန်ခန့်ကြာ အင်္ဂလိပ်လို ဗွီဒီယိုလမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ရပြန် သည်။ မကြည့်မနေရ ( ကွန်ပတ်စရီ ) ဖြစ်သည်။ ကတ်ဒ်သုံးကတ်ဒ်ပြောင်း၊ လက်မှတ်သုံးကြိမ်ထိုးပြီးမှ လိုရာခရီး ရောက်တော့သည်။ ရောက်ပြီ ဆို
သည်နှင့် သူတို့ ဘာကြောင့် ဒီလောက် တင်းကြပ်ပါလိမ့်ဆိုသော အဖြေ ကိုလည်း ရလိုက်သည်။ မီးခြစ်ဆံ တစ်ဆံကြောင့် ဤ ဂျူရောင်းကျွန်းငယ် တစ်ကျွန်းလုံး ငါးမိန်အတွင်း ပျောက်သွားနိုင်သည်။
၁၀ နာရီမှာ အခန်းအနားစမည်ဖြစ်သည်။ မိမိရောက်ပြီး သိပ်မကြာမီ ခရစ္စယန်၊ အစ္စလမ်ဘုန်းတော်ကြီးများလည်း ရောက်လာကြသည်။ ထိုစဉ် ကျွန်ုနှင့် ပထမဆုံး မျက်လုံးချင်းဆုံမိသည်က အစ္စလမ် ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ် သည်၊ သီဟနာဒ ဆိုသော ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းသည် မြန်မာ ရဟန်းတစ် ပါးဖြစ်သည်ဆိုတာကိုလည်း သင်္ကန်းအရောင်ဖြင့်ပင် သိသာနိုင်၏။
မှန် မမှန်တော့ မသေချာပါ။ မိမိ၏ ထိုအစ္စလမ်ဘုန်းတော်ကြီးကို ကြည့်သော အကြည့်တွင် အားနာမှုတချို့ ပါနေမည်ထင်၏။
ထိုစဉ် ခရစ္စယန် ဘုန်းတော်ကြီးက မိမိတို့ကို ပွဲကြည့်ပရိသတ်က ပွဲကိုစောင့် ကြည့်သလို ကြည့်နေသည်ဟုလည်း ခံစားလိုက်ရ၏။ ခံစားမှုဟူသည် အ ချက်အလက်( Fact ) မဟုတ် ခံစားမှု ( Feeling ) သက်သက်သာ ဖြစ် သည်။ အရွယ်ကိုကြည်ရာမှာလည်း သူတို့က ပိုကြီးမည်ဟုထင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ထိုင်ရာမှထကာ အရိုအသေပေးဖို့ အသွားတွင် အစ္စလမ် ဘုန်းတော်ကြီးကပင် သူ့လက်ကို ဦးစွာကမ်းပေးသည်၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိမိတို့ ယဉ်ကျေးမှု လက်အုပ်ချီခြင်းကို ဖျက်ကာ သူ့လက်ကို တင်းတင်းပြန် ဆုတ် လက်ဆွဲနှူတ်ဆက်လိုက်သည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ ရဟန်းသိက္ခာ တစ်ပြားသားမှလျော့မသွားဟုထင်သည်၊ သူ့လက်မှ နားလည်မှု၊ နွေးထွေးမှုတို့ပင် ရလိုက်သည်ဟု ခံစားလိုက်ရမိသည်။
ပြီးမှ ခရစ္စယန် ဘုန်းတော်ကြီးကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်မိ၏။ ကျွန်ုပ် တို့ သုံးယောက်စလုံးအတွက် ယုံကြည်မှု မတူသည့်ကြားက တူနေသည့်အချက် တစ်ချက်ရှိသည်။ ထိုအချက်က ကုမ္ပဏီနှင့် အလုပ်သမားများ ဘေးရန် မရှိ ကြရေး မေတ္တာတရားပင်ဖြစ်သည်။
ဤ၌ ဒုတိယကောက်ချက်ကို ဆွဲလိုက်သည်။
သတ္တဝါတွေအပေါ် မေတ္တာထားဖို့ ဘာသာယုံကြည်မှု တူစရာမလို။
ဆွဲမိသော တတိယကောက်ချက်က ဂျူရောင်း အိုင်းလန့်ဒ်ပင်ဖြစ်သည်။ စည်း ကမ်းမဲ့သော လူတစ်ယောက်ကြောင့် ၅ မိနစ်အတွင်း ထိုကျွန်းငယ် ပျောက် သွားနိုင်သည်။ ဆေးလိပ်းလေး တစ်ဖွာ ဖွာမိတာများ ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ် လို့ကွာ ဆိုသည့် ဖြစ်ကတတ်ဆန်းဆင်ခြေသည် ထိုကျွန်း၏ ကျိန်စာ သာ ဖြစ်တော့သည်။
ထိုမှတဆင့် အငြိမ်မနေတတ်သောစိတ်က ငါတို့ ဒီမိုကရေစီကလည်း ဒီ ဂျူရောင်း အိုင်းလန့် လေးလိုပါပဲလားဟု တွေးမိလေသောအခါ..... ။
၉၆၉ ကို ဘယ်လို ဂလိုဘယ်ကြမလဲ
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 3/29/2013 - No comments
အကြမ်းဖက်မှုသည် ၉၆၉ မဟုတ်သလို ၉၆၉ သည်လည်း အကြမ်းဖက်မှု မဟုတ်ပါ။ ဘာသာတရား၏ သင်္ကေတ တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ဤ လှုပ်ရှားမှု သည် အသစ်အဆန်း တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း သာသနာ့အလံတော်နှင့် ဗိုလ် မှူး အော်လ်ကော့တို့က သက်သေခံသည်။
စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် ပြောစတမ်းဆိုလျှင် ခြောက်ရောင်စုံ အလံတော်ကမှ အ ဆုံးအမထဲမှာ အဖျားကျနေသေးသည်။ ဤ ၉၆၉ က သာသနာ့သွေးကြော ကြီးသုံးခုကို ကိုယ်စားပြုနေသည်။
သာသနာ့အလံတော်နှင့် ဆက်စပ်၍ တချိန်က ဗိုလ်မှူး အော်လ်ကော့ကို မူလ တည်ထွင်သူဟု ထင်မှတ်နေမိသည်၊ အမှန်က မဟုတ်ပါ။ ဗိုလ်မှူး အော်လ်ကော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်မီကတည်းကပင် ခြောက်ရောင်စုံ သာသနာ့ အလံတော်က သီရိလင်္ကာမှာ တည်ထွင်ပြီးသားဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤမျှ မတွင်ကျယ်ခဲ့။ ထေရဝါဒ နိုင်ငံတိုင်း အတည်ပြုခံရသည်အထိ မရောက်ခဲ့။ အဓီက အကြောင်းက ဒီဇိုင်းပညာ မကောင်းလှသောကြောင့်ဟု ဆိုရမည် ထင်သည်၊ အလံက အထက် အောက် ရှည်လျားပြီး အသုံးပြုရန် အခက်အခဲရှိသည်။ ဤတွင် ဗိုလ်မှူး အော်လ်ကော့က ယနေ့ မြင်တွေ့နေရ သည့် သာသနာ့ အလံတော်ပုံစံကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သည်။
ခေတ် စကားဖြင့် ပေါက်သွားသည်ဟု ဆိုရပေမည်။
ခြောက်ရောင်စုံ သာသနာ့ အလံတော်ကို ထေရဝါဒနိုင်ငံတိုင်း သဘောတူ သုံးစွဲကြသလို ဤ ၉၆၉ ကိုလည်း အားလုံးသဘောတူသုံးစွဲလာအောင် ငြိမ်း ချမ်းသောနည်းဖြင့် စတင်လှုပ်ရှားလျင် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ထင်သည်။
ဤ လှုပ်ရှား မှုမျိုးက နိုင်ငံတော်အဆင့်က စလျင် ပို၍ထိရောက်နိုင်သည်။ ဤ၌ နိုင်ငံတော်အဆင့်ဟူသည် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့လိုမျိုးကို ဆိုလို သည်။ သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့က စိတ်မဝင်စား (သို့) ပါဝင်ပတ်သက်သည် ဟု မထင်မှသာ အခြား အဖွဲ့များကလှူပ်ရှားတာ ပိုကောင်းသည်ဟု ထင်မိပါ သည်။
ပထမဆုံး ခြေလှမ်းအနေဖြင့် ၉၆၉ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခြား ထေရဝါ ဒနိုင်ငံတို့၏ သဘောထားကို တောင်းခံသင့်သည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားကောင်းလျင် စွမ်းနိုင်သော ( စွမ်းနိုင်သောဟူသည် ဩဇာနှင့် ပစ္စည်းလေးပါး ပေါများခြင်ကို ဆိုလိုပါသည် ) ဆရာတော် တစ်ပါးပါးက ဦးဆောင်ပြီး ထေရဝါဒ ကွန်ဖရင့်လိုမျိုး ကျင်းပပြီး ကွန်ဖရင့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ၉၆၉ ကို စတင်ရလျင် ပို၍ထိရောက်နိုင်သည်။ သာသနာ့ အလံတော် ကိုလည်း ဤသို့ပင် စတင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်း ယုံကြည်မိသည်၊ ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာတို့မှာလည်း ဘာသာရေးပြဿနာက ရှိနေကြသောကြောင့် ဤသို့ ယုံကြည်မိခြင်းဖြစ်၏။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ကမ္ဘာကို အရင်ဆုံး ပြရမည်က ၉၆၉ သည် အကြမ်းဖက် မှုနှင့် လုံးဝမဆိုင်၊ ဘာသာရေးသင်္ကေတ တစ်ခု အသုံးပြုကာမျှ ဖြစ်သည် ဆို သည့် အချက်ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာက ယနေ့ အနည်းငယ် ရောထွေးရှက် တင်ဖြစ်နေ၏။ ဤသို့ဆိုသဖြင့် အမှား အမှန်ကို ဝေဖန်နေခြင်းမဟုတ်ကြော င်း သိစေချင်ပါသည်။ ၉၆၉ ပုံရိပ် ကမ္ဘာ့အမြင် လှစေလိုခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ခရစ္စယန်တို့က ခရော့စ်ကိုသုံးသည်။ မွတ်စလင်တို့က ၇၈၆ ကိုသုံးသည်၊ သို့ဆိုလျင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကိုရော ဘာကြောင့် ၉၆၉ မသုံးသင့်ဟု ဆိုနိုင် မည်နည်း။
မိမိတို့ဘာသာ လှုပ်ရှားမှု စတင်ပြီး ယင်း လှုပ်ရှားမှုမှာ အခြား ထေရဝါဒနိုင်ငံ တို့ပါ ပါလာအောင် စည်းရုံးနိုင်မည်ဆိုလျင် အလွန်သင့်တော်သော ကိစ္စဟု ထင်မိ၏၊ သို့သော် ထိုလှုပ်ရှားမှုသည် ငြိမ်ချမ်းရေးသင်္ကေတနှင့် တွဲစပ်နေမှ အများ၏ ထောက်ခံမှုရမည်။ အများပါလာမှလည်း လှုပ်ရှားမှုက ထိရောက် သည်။ ထိုအခါ ၉၆၉ သည် မြန်မာကိုသာ ကိုယ်စားမပြုတော့၊ ကမ္ဘာမှာ ပြန့် နေသော ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်စားပြုတော့၏။
Precious Mirror Samadhi Song (သမာဓိ အမြုတေ မှန်တေး)
in ဘာသာပြန် ရသ (ဓမ္မစာပေ), သီဟနာဒ - on 3/28/2013 - No comments
Such is the hidden Dhamma. transmitted by Buddhas.
Today you have obtained it,ensure that it is protected well.
ငုတ်လျှိုးဓမ္မ ဗုဒ္ဓအရှင်တို့ ဖွင့်ပြခဲ့
ဒီနေ့ အသင်ရခဲ့ရင် ကောင်းကောင်းကွယ်ဖို့ ပြင်။
Snow inasilver bowl,a(white)heron in the moonlight.
Different species are not the same;this is known when they mix.
ငွေခွက်ထဲက စနိုး၊ လရောင်အောက်က ငှက်ချိုးဖြူ
မတူတာတွေဟာ မတူဘူး၊ မတူမှန်းလည်း ပေါင်းမိမှသိ။
Its meaning is not found in words,but it responds when sought.
Obscured truth creates problems,non-attention leads to error.
စကားလုံးထဲ သူ့အဓိပ္ပါယ်မရှိ တွေ့မိတော့မှ ရှိကြောင်းပြ
ဝေဝါးသစ္စာ ပြဿနာရှာ၊ သတိ မထားမိရာက အမှားဆီ။
Repulsion and attraction are both wrong,likeagreat fire.
When expressed in flowery words,this isacase of pollution.
ငြင်းဆန်ခြင်း ဖျာယောင်ခြင်း နှစ်ခုစလုံး မီးလို ပူပြင်း
မာယာစကားလုံးများ သုံးလာရင် အဲ့ဒါ ပိုလူးရှင်း။
Ultimate principle shrine at midnight,but is not seenadown.
A guiding law for life ,it extracts all from worldly misery.
ပရမတ္ထဥပဒေတော် ညလယ်မှာလင်း၊ နံနက်ခင်းမှာကျ မတွေ့ရပြန်
ဘဝအတွက် လမ်းပြမဂ္ဂင်၊ လောက ဒုက္ခ ဖဲ့ထွက်ယာဉ်။
Although non-existence, it is not without language.
Facingaprecious mirror, one's reflection is seen.
သုညတ အမှန်ဖြစ်ပေမဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ကင်းမနေ
ဓမ္မမှန်မှာ သင်ရှာကြည် သင့်ပုံရိပ်ဟာ မှန်ပေါ်မှာ။
You (on your own) are not great, but ultimate principle is great within you.
Likeababy born into the world, complete with five characteristics.
သင်ကိုယ်တိုင်ပဲဆို ဘာမှမဟုတ် ဒါပေမဲ့ အဟုတ် ပရမ သင့်ထဲမှာ
မေးကင်းစ ကလေးလို လက္ခဏာ ငါးပါးနဲ့။
It does not go, it does not stay, it does not arrive, it does not leave.
Unsure words are uttered, about "existence" and "non-existence".
သူ မသွား၊ သူ မနေ၊ သူ မရောက်၊ သူ မစွန့်
သူ မပီမသ စကားတွေရွတ်" လောက" နဲ့ "သုညတ" အကြောင်း။
They do not achieve their objective, language has not real meaning.
လိုရင်းကိုတော့ မရောက်ကြ စကားလုံးမှာ အဓိပ္ပါယ်စစ် မရှိလို့။
(ယခုလထုတ် The Middle Way ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂျာနယ်မှ ယူထားပါသည်၊ အပြည့်အစုံ မဟုတ်ပါ။)
သမီးလေးရဲ့ မောင်လေး (ကမ်းလက် လပတ်လည်)
in Mr Jam, ဇင်ဝေသော် - on 3/28/2013 - No comments
ရာထူးတစ်ခုအတွက်လျှောက်ထားရန် ဤစာကို ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤ ရာထူးအတွက်လျှောက်ထားရန် အသက်အရွယ်အားဖြင့် အတော်နောက် ကျနေပြီဖြစ်သော်လည်း အရည်အချင်းကို ထောက်ဆလျှင် အခွင့်အရေး ရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ပြီး လျှောက်ထားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
1 ) သမီးလေးနှင့်အတူ လမ်ဖြတ်ကူးရင်း စုတ်ပြတ်နေသော သူတောင်းစား တစ်ယောက်ကို တွေ့ရပြီး နှာခေါင်းပိတ် ဝေးဝေးကရှောင်သွားဖို့ ကြိုးစားနေ စဉ် ကျနော့်သမီးလေး ထို သူတောင်းစားကြီးကို ဂရုဏာ မျက်စေ့ဖြင့်ကြည့် ပြီး သူမ မုန့်ဖိုးရတာလေးထဲမှ အကြွေတချို့ သူတောင်း စားကြီးခွက်ထဲ ထည့်နေရှာသည်။
2 ) ထိုမှတဆင့် ကားပါကင်ကိုရောက်ရာ မိုးရွာပြီး မိုးရေတချို့ စက်ဆီ တ ချို့ဖြင့် ညစ်ပေနေသော မြေပြင်ကို တွေ့ရပြီး ကျနော်က အော်ဂလီဆန်နေ စဉ် ကျနော့်သမီးလေးကတော့ ဒါကိုပင် သက်တန့်ရောင်စုံတစ်ခု တွေ့ရသည့် အလား ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စွာ ကြည့်နေရှာသည်။
3 ) အဲဒီမှတဆင့် ကားလမ်းပြင်နေသော အလုပ်ကြမ်းသမားများ အနား ရောက်ရာ ဖုန်များ၊ အန္တရာယ်များ ဝိုင်းရံနေသည့် ထိုနေရာအနီးသို မသွားရန် သတိပေးမလို့ လုပ်နေစဉ်မှာ ကျနော့်သမီးလေးကတော့ မြို့တော် သာယာရေးအတွက် ပင်ပင်ပမ်းပမ်း အလုပ်လုပ်နေသော အလုပ်ကြမ်း သမားများကို ဂုဏ်ယူသောအကြည့်ဖြင့် ရှစ်မိနစ်ကြာအောင် ရပ်ကြည့်နေ ခဲ့သည်။
4 ) နေ့ခင်းမှာ တစ်ခုခုစားကြဖို့ တိုင်ပင်စဉ် ကျနော်က Starbucks ဆိုင်သွား ရန် အကြံပြုသည်။ ကျနော့်သမီးလေးက ကျနော့်လက်ကိုဆွဲပြီး ခေါက်ဆွဲ ဆိုင်ထဲ ခေါ်သွားခဲ့သည်။ အလွန် အရသာရှိတဲ့ နေ့လည်စာဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံရပါလမ့်မည်။ အကုန်အကျအားဖြင့် ကျနော်တို့စားသမျှ အားလုံး၏ ကျသင့်ငွေသည် ဒီဇိုင်းလှလှ ပြင်ဆင်ထားသည့် cappuccino.ကော်ဖီ တစ် ခွက်၏ တစ်ဝက်မျှပင် မရှိပါ။
5 ) ဒီနောက် ပျော်ပျော်ပါးပါးပင် အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ အိမ်မှာရှိ ခိုက် ကျနော်က စိတ်မပါ့တပါ ( မှင်သေသေဖြင့် ) စာအုပ်ထူထူ များ ကို ဖတ်နေစဉ် ကျနော့်သမီးလေးကတော့ ဟန်မလုပ်ဘဲ သူမကြိုက်သည့် ကာတွန်းကားကိုကြည့်ပြီး ရယ်ရွှယ်မဆုံး ဖြစ်နေရှာသည်။
6 ) နောက်ဆုံး ကျနော်တင်ပြလိုသည်မှာမီးဖိုထဲမှာ အသီးလှီးရင်း သမီးလေး ရဲ့လက်ကို ဓားရှမိသည်
" ဒါတွေကို မလုပ်ပါနဲ့၊ မကိုင်ပါနဲ့ပြောတာ ဘယ်တော့မှ နားမထောင်ဘူး " စသဖြင့် ကျနော်က ဆူမိ ငေါက်မိရာ ကျနော့်သမီးလေးက မျက်ရည်များဖြင့်
" ဟုတ်ကဲ့ ဒယ်ဒီ၊ သမီး နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး " လို့ ဝန်ခံရှာသည်။
7 ) နောက် ဒေါသမပြေသေးတော့ ဟင်းချက်ဖို့ လှီးရင်းဖြတ်ရင်း ကျနော့် လက် ကိုလည်း ဓားအနည်းငယ် ရှမိပြန်သည်။ ဒီအခါ ကျနော့်သမီးလေးက
" ဖေကြီးလက် ဓားရှတာ ဘယ်လောက်များသွားသလဲ၊ ဖေကြီး လက် ကိုရေဆေး၊ သမီး အနာကပ် ပလာစတာသွားယူပေးမယ် "
ဆိုပြီး ကျနော့်ကို အားပေးနေရှာသည်။ နာနေသူကို ဆူဖို့ ငေါက်ဖို့ ဝေးရော။
ကျနော်လျှောက်ထားချင်တဲ့ရာထူးက သမီးလေးရဲ့ မောင်ငယ်ရာထူးပါ။ ကျနော်ဟာ သမီးလေးလောက် မရင့်ကျက်၊ သမီးလေးလောက် မရိုးသား တာ အမှန်ပါ။
ဖြစ်နိုင်လျင် ကျနော့်အသက် ( ၄၂ ) နှစ်ကို လျှော့ပေါ့ စဉ်းစားပေး ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
( ရှေ့ပိုင်း က မစ္စတာဂျင်းမ် ကို မှီးပြီး အဆုံး 5,6,7သာ ကျနော့် အတွေးဖြစ်ပါတယ် )
မစ္စတာဂျင်းမ် ရဲ့ ဆောင်းပါး
in Hard Truths By Lee Kuan Yew, ဇင်ဝေသော် - on 3/27/2013 - No comments
လီကွမ်းယုစာကို စောင့်ဖတ်သူချို့ စိတ်ဝင်စားကြမယ် ထင်ပါတယ်။ မနေ့က ပဲ စထရိတ်တိုင်းမ်က အိတ်စက်ကူးတစ် ဒါရိုက်တာ ရှယ်လီ ဟျူး၊ မားကက် တင်း နဲ့ အော်ပရေးရှင်း ဒါရိုက်တာ ကလဲရာ ဝမ်း တို့နဲ့တွေ့ပြီး ဒီ Hard Truths ( to keep Singapore going) စာအုပ် ဘာသာပြန်ဖို့ကိစ္စ ဆွေးနွေြး ဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံး အားတက်သရော အားပေးကြလို့ ကျေနပ်ရပါတယ်။ ဒီမှာ ကျနော်တို့ သဘောတူညီမှုရလိုက်တာက ( ဖွင့်ပြောလို့လည်း ရတာက ) စင်္ကာပူရီးယန်းကို ဦးတည်ပြီးရေးတဲ့ အယ်ဒီတာမှတ်ချက်ကို ဘာသာမပြန်ဘဲ မြန်မာတွေရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ၊ လိုက်ဖ်စတိုင်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ စံထိုးပြီး ကျနော့်အမြင်ကို အခန်းတိုင်းမှာ မိတ်ဆက် ( သို့ ) ဝေဖန်ချက် ရေးရမယ်ဆိုတာပါ။
ဒီနေ့ ( Part 2, Insights for the young and curious ) ထဲက ခေါင်းစဉ် ငယ် ( ၁၀ ) Not your average grandad ကို
" ရွက်ကြမ်းရေကျို အဘိုးမဟုတ် " အမည်နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ သဘောတူသည်ဖြစ်စေ မတူသည်ဖြစ်စေ လီကွမ်းယုဟာ လီကွမ်းယုကနေ တစ်ပြားသားမှ လျော့သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂေး ကိစ္စ၊ လိင် တူမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စတွေကို ဖြေပေးနေတော့ အထင်ကြီးမိတယ်။ မြန်မာလူကြီး အများစုဆိုရင် အချိန်ဖြုန်း ကလေးကလား မေးခွန်းတွေလို့ တွက် ထားကြမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ရွာသားအနေနဲ့ ကမ္ဘာက ဒါကို သိချင်နေတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ သူပြောတာတွေကို လက်ခံ၊ မခံ အသာထားပြီး ဒီကိစ္စမျိုးတွေ ဖြေပေးတာကို လေးစားမိပါတယ်။ မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်မထားကြရင် မြန်မာတွေမှာလည်း တောင်ပြုံးပွဲ ရှိပါတယ်။
တီဟီရန် က မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ကြည့်တာချင်း မတူရင်တောင် လီကွမ်းယုကို လက်ခုပ်တီးလို့ အားမရခဲ့ပါဘူး။
တီဟီရန် က ဆိုတော့ ဘယ်ဘာသာဝင်ဆိုတာ ပြောဖို့ မလိုတောပါဘူး။ အဲဒီ အမျိုးသမီးလေး ကိုယ်ဝန်ရှိလာတယ်။ မိသားစု တစ်စုလုံးက သဘောမတူဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ ပြောတယ်။ သူမကလည်း ဖျက်ဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အယ်ထရာဆောင်းထဲမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ မမွေးရသေးတဲ့ ကလေးကို မြင်လိုက်ရပြီး ဒီကလေးကို မွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အကျိုးဆက်က သူမကို အမွေပြတ်စွန့်တယ်။ ဘာသာခြား ဖခင်ရဲ့ကလေးကိုအသိအမှတ်မပြုဘူး ။ နိုင်ငံတော်က ပေးတဲ့ ဘေဘီ ဘောနပ်တောင် မရဘူး။
အဲဒီ ကလေးမိခင်ကို လိကွမ်းယုက ထောက်ခံတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လူဦးရေ လျော့ပါးလာချိန်မှာ ကလေးယူလို့ တဲ့။ အဲ ပြီးတော့ အဲဒီ မိန်းကလေးက ပညာတတ်၊ ရဲရင့်သူဖြစ်တော့ သူမကလေးကလည်း ပညာတတ်လေး ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း များလို့တဲ့။
ကဲ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစု မြန်မာတွေအမြင်နဲ့ ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီ ကလေး အမေနဲ့ လီကွမ်းယုကို လက်ခုပ်တီးတာ ကျနော်တစ်ယောက်တည်း မဖြစ်နိုင်တာ သေချာပါတယ်။
မေး ။ ။ အခြောက် (gay) တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မစ္စတာလီ ဘယ်လို မြင်ပါ သလဲ။ လိုက်(ဖ်)စတိုင်လား၊ ဗီဇလား။
ဖြေ ။ ။ လိုက်(ဖ်)စတိုင် မဟုတ်ဘူး။ ဗီဇ။ သိချင်ရင် စာအုပ်တွေ၊ ဆောင်း ပါးတွေကို ဖတ်ကြည့်။ ဗီဇ ကတည်းက ပါလာတာ။ သူတို့ ရွေးချယ်ထားကြတာ မဟုတ်ဘူး။ မွေးကတည်းက ပါလာတာ။ ယောက်ျားနှစ်ယောက် အချင်း ချင်း၊ မိန်းမနှစ်ယောက် အချင်းချင်း အတူနေကြမယ်ဆိုရင် လွှတ်သာ ထား လိုက်။
သူတို့ ကလေးမွေးစားခွင့် ပြုသင့်သလား။ မပြုသင့်ဘူးလားဆိုတာ ကတော့ ပြောစရာ ရှိသွားပြီ။ မွေးစားတဲ့ ကလေးကို ဘယ်သူက စောင့်ရှောက်မှာ လဲ။ သူတို့ကိုသာ မသိမသာ မဟုတ်ဘဲ တရားဝင် လက်ထပ်ခွင့် ပြုလိုက်ရင် သူတို့လည်း ကလေးမွေးစားခွင့် ရှိတယ်၊ ဘာညာတွေ ရှိလာတော့မှာ။ ဗီဗီယံ ဗလကရစ်ရှနန် ကတော့ ဗီဇကိစ္စက သက်သေပြုလောက်အောင် မထင်ရှား ဘူးလို့ (ဆေးပညာအရ) ပြောတယ်။ ငါကတော့ ဗီဇလို့ပဲ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံ ကြည်တယ်။ လောကကြီးထဲမှာ သာဓကတွေ အလုံအလောက် ရှိနေတာပဲ။ သူတို့က မွေးရာပါ။ ဒီအတိုင်းပဲ လွှတ်ထားလိုက်၊ ပြီးရော။
မေး ။ ။ ဒီမေးခွန်းက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ နည်းနည်းဆန်ပါတယ်။ မစ္စတာ လီရဲ့ မြေးတစ်ယောက်ယောက်က သူ (သူမ) ဟာ ဂေးပါ ( လက်စဘီယမ်းပါ ) လို့ ပြောရင် ဘယ်လို ခံစားရမလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဘာ ခံစားနေရမှာလဲ။ မွေးရာပါ ဗီဇပါဆို။ Dick Cheney ဆို ရင် ဂေးတွေကို ကြည့်လို့ မရဘူး။ သူ့သမီးကျတော့ မွေးရာပါ လက်စဘီး ယန်းလေး (Lesbian) ဖြစ်နေရော။ သူက ပြောတယ်
“ကျွန်တော့သမီးကို အချစ် မလျော့ပါဘူး” တဲ့။
ကဲ … ။ (အမေရိကန် ဒုတိယသမ္မတဟောင်း ဒစ်ချေနီရဲ့ ဒုတိယသမီး Mary Cheney က လက်စဘီးယန်းပါ)။ မူဝါဒအားဖြင့် သူက ဂေး၊ လက်စဘီးယန်း ကို ဆန့်ကျင်တယ်။ သူ့သမီးက လက်စဘီးယန်း လာဖြစ်နေတယ်။
သူ့သမီးကို သူ စွန့်ပစ်ရမှာလား။ အဲ့ဒါ ဘဝပဲ။ ငါ ဆိုလိုတာက ငါ့မြေးတွေ အားလုံး တစ်ယောက်မှ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်လာတော့လည်း ဘာ တတ်နိုင်မှာတုန်း။
မေး ။ ။ ယောက်ျားချင်း၊ မိန်းမချင်း အတွဲက ကလေးမွေးစားရင် ဘာပြဿ နာရှိနိုင်လို့လဲ။ မစ္စတာလီ ပြောခဲ့တာက ဘယ်သူက ကလေးကို စောင့်ေ ရှာက်မလဲ … အဲ့သလိုလား။
ဖြေ ။ ။ ယောက်ျားနှစ်ယောက်မှာ ဘယ်သူက ကလေးကို ပြုစုမှာလဲ။ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်ကတော့ ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်။ ဒါတောင် သူတို့ဝမ်းနဲ့ လွယ်ထားရတဲ့ ကလေးမဟုတ်တော့ မသေချာလှသေးဘူး။ အမျိုးသားဖက် ကမျိုးစေ့လိုဟာမျိုးကို အတုလုပ်ပြီး ထည့်ပေးထားနိုင်ရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ရ တာနဲ့ တပြိုင်နက် မိခင်စိတ် ပေါက်လာစရာ ရှိတယ်။ ယောက်ျားနှစ်ယောက် ကတော့ ယောက်ျားလေးပဲ မွေးစားမွေးစား၊ မိန်းကလေးပဲ မွေးစားမွေးစား အဓိပ္ပါယ် သိပ်မရှိလှပါဘူး။ ပြဿနာတွေက ဂွင်းဆက်ကြီးလိုက် တက်လာ မှာ။
ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ့် အနေအထား ရောက်လာရင်တော့ ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့။ အခု အခြေအနေက အဲသလောက်အထိ မရောက်သေးပါဘူး။ လူတွေက လည်း လက်မခံနိုင်သေးဘူး။ ကုန်ကုန် ပြောရရင် ဝန်ကြီးတချို့ကကို လက်မ ခံနိုင်သေးတာ။ ငါကတော့ လက်တွေ့အမြင်နဲ့ပဲ ကြည့်တယ်။ ဒီကိစ္စက တကယ်ကြီး ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ငါတို့လည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒါက အသစ်အဆန်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေးပဝေသနီ ကတည်းက ရှိလာတာပါ။ ငါကတော့ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်လို့ပဲ ထင်တယ်။
မေး ။ ။ အိမ်ထောင်မရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပါလီမန်အမတ်အဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုဖို့ကိုပဲ စင်္ကာပူမှာ အချိန် အတော်ယူခဲ့ရတယ်နော်။ စင်္ကာပူမှာ ဂေးတစ်ယောက် ပါလီမန်မှာ အမတ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ရှိသလား။ ဥရောပမှာတော့ ဒီကိစ္စက ပျံ့နှံ့နေပြီ။
ဖြေ ။ ။ ငါ့သဘောအရကတော့ ပါလီမန်အမတ်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ အလုပ်ကို သူ တာဝန်ကျေအောင် လုပ်နိုင်ရင်၊ သူ့မဲဆန္ဒနယ်ကို စောင့်ရှောက်နိုင်ရင်၊ အစိုးရကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရင် ဘာမှ ပြောစရာ မရှိဘူး။ ကျန်တာက သူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စပဲ။
ဗြိတိန်မှာ အဲ့သလို အမတ်တစ်ယောက် ရှိတယ်။ နာမည်တော့ ထုတ်ပြောလို့ မကောင်းဘူး။ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီက။ သူက ပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ မှန်း ထားတာ။ မိတ်ဆွေတချို့နဲ့ရယ်၊ သူရယ်နဲ့အတူ ငါတို့ ညစာ စားဖူးတယ်။ (သူ ရည်ညွှန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်မှာ Michael Portillo ဖြစ်ပြီး (၁၉၉၄ - ၁၉၉၅) က အလုပ်သမားဝန်ကြီးဖြစ်ပြီး ၁၉၉၅ မှ ၁၉၉၇ အထိ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။)
အောက်စဖို့(ဒ်) တက္ကသိုလ်မှာ တက်နေစဉ်က လိင်တူဆက်ဆံမှု ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီကိစ္စအတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လူရှေ့ချပြဖို့အထိ စိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက နောက်ပိုင်းမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်လိုက်ပြီး ကလေးနှစ်ယောက်တောင် ရှိတယ်။ ပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်တော့ သူ ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။
သူ့ဘာသာသူ ဖွင့်ချလိုက်ရင် လေ့လာစုံစမ်းမှုတွေ ရှိမလာနိုင်တော့ဘူးလို့ သူ ထင်တယ်။ ဖွင့်ပြောတော့လည်း အခြေအနေကတော့ သိပ်မကောင်းလှဘူး။ ဖွင့်မပြောဘူးဆိုရင်လည်း အတိုက်အခံတွေက ဒီကိစ္စကို မပေါ်ပေါ်အောင် အနံ့ခံလိုက်ကြမှာပဲ။ ဒါဆိုရင် အခြေအနေက ပိုဆိုးသွားမယ်။
လူတစ်ယောက်ပေမဲ့ အခြေအနေက နှစ်မျိုးလေ။ သာမန်လူတစ်ယောက် ဆို ရင်တော့ ဒါက ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။ ဝန်ကြီးလို၊ ဝန်ကြီးချုပ်လို ပုဂ္ဂိုလ်က အဲ့ သလို ဆိုရင်တော့ အခြေအနေက တမျိုး ဖြစ်သွားပြီလေ။
Ted Heath ဆိုရင် လူလွတ်ပဲ (၁၉၇၀ မှ ၁၉၇၄ ခုနှစ်အထိ ဗြိတိသျဝန်ကြီး ချုပ်)။ သူလည်း လိပ်တူ ဆက်ဆံသူပဲလို့ ပြောကြတဲ့ ဝန်ကြီးတွေ ရှိတယ်။ သူတို့ နာမည်တွေကိုလည်း ငါ မပြောတော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အတိုက်အခံ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေက တော်တော် ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်း ငါ့ကို ပြောကြ တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက သူဟာ အရွယ်ကောင်းပဲ။ ၄၅ နဲ့ ၅၀ ကြားမှာ။ လူလွတ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အဲ့ဒါ … အောက်စဖို့(ဒ်) မှာလေ။ အတိုက်အခံ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေက ဒီကိစ္စကို အကြီးအကျယ်လုပ်ပြီး ငါ့ကို ပြောနေကြ တာ။ အမှန်ပဲပေါ့။ ကိုယ်ကျင့်တရား ရှု့ထောင့်ကကြည့်ရင် သိပ်မဟုတ်တော့ဘူး။ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် မဖြစ်ထိုက်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒါတွေ ဖြစ်ခဲ့ တာက ၁၉၇၀ - ခုနှစ်တွေတုန်းက။
'ထား' တို့ စတိုရီများ
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 3/26/2013 - No comments
Siti ။ ။ နင်တို့အိမ်ရှင်က တစ်ခါတစ်ခါ သူကိုယ်တိုင် ထမင်းဟင်း ချက်တယ်ဆို
Maribet ။ ။ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှစွာပါပဲ၊ ဟုတ်တယ်။
Siti ။ ။ ဒါနဲ့များ ဘာကြောင့် ကံမကောင်း အကြောင်းမလှ ဖြစ်နေ ရတာလဲ
Maribet ။ ။ သူက အဝတ်အစားတင် " dresses to kill " မဟုတ်ဘူး၊ ချက်ရာ ပြုတ်ရာမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။
Siti ။ ။ အစားမစားခင် ဆုတောင်းစာတွေ ရွတ်တတ်သလား။
Maribet ။ ။ အိမ်ရှင်မကိုယ်တိုင် ဝင်ချက်တဲ့ နေ့တွေမှပါ။
အလုပ်နားတဲ့နေ့မှာ Maribet နဲ့ Teresita တို့ အပြင်ထွက် လည်ပတ်ကြ ရင်း နေ့ခင်းရောက်တော့ စားသောက်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး သူတို့မှာ ပါလာတဲ့ နေ့ လည်စာတွေ ထုတ်စားနေလိုက်ကြတယ်။
ခဏနေတော့ စားပွဲထိုးရောက်လာပြီး ဒီဆိုင်ထဲမှာ ကိုယ်ယူလာတဲ့ အစား အစာတွေ ကိုယ် ပြန်မစားရဘူး လို့လာပြောတယ်။
ဒီတော့ Maribet.က “No problem,” ဆိုပြီး သူယူလာတာကို Teresita ကို ကျွေးပြီး Teresita ပါလာတာကို သူ ယူစားလိုက်တယ်။
ကိုယ့် နိုင်ငံသား ပဓာနဝါဒ (သို့) နိုင်ငံတချို့ရဲ့ ဖောရိန်းအလုပ်သမား ကန့်သက်ချက်များ(၂)
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 3/26/2013 - No comments
နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ဩစတေးလျက အတင်းကြပ်ဆုံး နိုင်ငံလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ပထမဆုံး ဩစတေးလျအစိုးရ အလိုရှိတာက နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ငှါးတော့မယ်ဆိုရင် ဗီဇာယူစဉ်ကကို မားကတ်ဈေးနှုန်း ပေးထားရပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒီလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒေသခံတွေကို လစာမြှင့်ပေး မယ့်အစား ဈေးချိုတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို ခေါ်ခိုင်းမှာကို တပ်လှန့်ပြီးသား ဖြစ် တယ်လို့ ယုံကြည်ထားလို့ပါ။
နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားကို လစာပေးရာမှာလည်း ဒီလစာကို ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက် ပေးရတယ်၊ ဒေသခံကို လစာပေးရာမှာလည်း ဘာကြောင့် ဒီလ စာ ပေးရတယ်ဆိုတာ အစိုးရကို ရှင်းပြရပါတယ်။ သက်မှတ်ချက်အရ အ နည်းဆုံး အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဟာ ဩစတေးလျဒေါ် လာ (၅၁၄၀၀) ရှိနေရတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို အလွယ်တကူ ခေါ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဒေသခံ အလုပ်သမားတွေကိုလည်း ကျွမ်းကျင်လာအောင် လေ့ကျင့် ခန်းသင်တန်းတွေ ပေးကြောင်း အလုပ်ရှင်တွေက အစိုးရကို ရှင်းပြကြရတယ်။ ဒီလမ်းညွှန်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် သူတို့ ငှါးရမ်းထားတဲ့ အလုပ်သမားရဲ့ ဝင်ငွေ (၂) ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးဆောင်ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် လစာအား လုံးရဲ့ (၁) ရာခိုင်နှုန်းကို အလုပ်သမား လေ့ကျင့်ပေးရေး သင်တန်းတွေ အ တွက် သုံးစွဲရတယ်။
အလုပ်ရှင်တွေက ဩစတေးလျန်းတွေကို မငှါးရမ်းဘဲ နိုင်ငံခြားသားတွေ အများကြီးကို ငှါးရမ်းလာကြမှာ စိုးရိမ်လို့ အစိုးရက ဒီဥပဒေကို ၂၀၀၉ - ခုနှစ် ကတည်းက စတင် ကျင့်သုံးလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
" ဈေးနှုန်းသက်မှတ်ချက်ကိုလည်း အလုပ်ရှင်က ပေးကိုပေးရပါမယ်။ ဒါမှ လည်း နိုင်ငံခြားက အလုပ်သမားတွေကို လိုက်မရှာတော့ဘဲ ဩစတေး လျန်းတွေကို ငှါးရမ်းဖို့ ကြိုးစားလာကြမှာပါ” လို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန် ကြီးဟောင်း ခရစ်ဘရောင်းက ဘီဘီစီကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ ငှါးရမ်းမယ့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားဟာ ဩစတေးလျမှာ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ အရည်အသွေးတွေနဲ့ ပြည့် စုံနေသလားဆိုတဲ့ အချက်ကို အစိုးရကိုယ်တိုင်က စိစစ်တာပါ။ဩစတေးလျမှာ လိုအပ်နေတဲ့ အလုပ်အရေအတွက်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အစိုး ရက ထုတ်ပြန် ကြေညာတတ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ အလုပ်အကိုင် နှစ်ရာလောက် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဗိသုကာပညာရှင်တွေ၊ ဆောက်လုပ်ရေး ပရောဂျက် မန်နေဂျာတွေ၊ အင်ဂျင် နီယာ၊ ရှေ့နေ၊ လက်သမားစတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ဆေးဝါး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်မျိုးတွေ ပါပဲ။ အလုပ်အကိုင် ခေါ်ယူတဲ့ ကြော်ငြာတွေ သတင်းစာမှာ ထည့်ဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တာမျိုး မဟုတ်ပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားကို ခေါ်ယူဖို့ အမှန် တကယ် လိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ အလုပ်ရှင်တွေဘက်က လုံးဝ သေချာနေရပါမယ်။
ဩစတေးလျမှာ အများဆုံးရှိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ အရည် အချင်းရှိတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေ ပါပဲ။ ဒီနှစ်မှာပဲ အဲသလို ပညာရှင်တွေ အတွက် အမြဲနေထိုင်ခွင့် ဗီဇာ (၁၂၉၂၅၀) ခွင့်ပြုမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ အဲဒီ နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင်တွေကြောင့်ပဲ လူထုက မကျေမချမ်း ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒီလူတွေက သူတို့ အလုပ်တွေကို လုယူနေ ကြတယ်လို့ လူထုက ခံယူထားလို့ပါ။
သူတို့ကို ခွင့်ပြုတဲ့ ဗီဇာသက်တမ်းက သုံးလကနေ လေးနှစ်အထိ အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက အစိုးရဖက်ကနေ သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ အကျိုး စီးပွား အတွက် နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ် ကန့်သတ်တားမြစ်မှုတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရ က ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား အလုပ်ရှင်တွေဖက်ကလည်း သူတို့ကမ်း လှမ်းတဲ့ အလုပ်ကို လိမ်လည်တာ၊ လစာကို လိမ်လည်တာမျိုးတွေတော့ ရှိနေဆဲပါပဲလို့ သိရပါတယ်။
ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ သူနာပြုဌာန စတာတွေ မှာ နိုင်ငံခြားသားကို ခေါ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲ သုံးမျိုးကို ကျော် လွှားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး အလုပ်သမား ခန့်တော့မယ်ဆိုရင် အလုပ်သမားသစ် ခန့်အပ်ထားဖို့ တစ်လကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းရပါတယ်။ ခန့်အပ်မယ့် အလုပ်သမားက နည်းပညာရှင်အဆင့်နဲ့ ဒီအောက် နိမ့်တဲ့အဆင့်ဆိုရင် ပြည်တွင်း သတင်းစာ ကနေ နှစ်ပတ်ကြာအောင် အလုပ်ခေါ်ယူကြောင်း ကြော်ငြာ ထည့်ရပါတယ် ။ ပေးမယ့်လစာ အပါအဝင် ဖော်ပြရပါတယ်။
ပြီးရင် အစိုးရရဲ့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက အလုပ်ရှာဖွေနေသူတွေနဲ့ လစ် လပ်နေတဲ့ရာထူးကို ကြားကနေ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပေးတယ်။ အလုပ်ခန့်အပ်ခံရမယ့် အလုပ်သမားတွေမှာ အရည်အချင်း လိုနေမယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှင်ကနေ သင်တန်းတွေ ထပ်ပေးရပါတယ်။ ဒီသင်တန်း ဖြစ်မြောက်ဖို့ကိုတော့ အစိုးရရဲ့ အလုပ်သမား လေ့ကျင့်ပေးရေး ဘုတ်အဖွဲ့ (Employees Training Board) က ပူးပေါင်းကူညီပါတယ်။ နောက်ဆုံးအခက်အခဲကတော့ နောက်ဆုံးအဆင့်ပါ။ အလုပ်သမားသစ် ရှာဖွေရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ ဘယ်လောက် ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကို အလုပ်သမားရေးရာဦးစီးဌာန (Labour Department) ကို တင်ပြရပါတယ်။ ဒီလောက် ကြိုးစားပါလျက် ဒီအလုပ်အတွက် ဒေသခံတွေထဲက ရှာလို့ မရတော့တဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားကို ခန့်အပ်ခွင့်ပြုဖို့ လျှောက် ထားရပြန်ပါတယ်။ ဒီလျှောက်လွှာကို အလုပ်သမားရေးရာ အကြံပေးအဖွဲ့ (Labour Advisory Board) က စစ်ဆေးပြီး အလုပ်သမားရေးရာ ဦးစီးဌာန ကနေ ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒီလို ဥပေဒ ထုံးတမ်းစဉ်လာကိုတော့ အပိုအလုပ်သမား ခန့်အပ်ခြင်း အစီအစဉ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေက ၁၉၉၆ - ခုနှစ် ကတည်းက အတည်ပြု ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်က ဟောင်ကောင်ဟာ ပြည်ပလုပ်အား မဖြစ်မနေ လိုအပ်နေတဲ့ ကာလလည်း ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပဒေက ပြည်တွင်း အလုပ်သမားတွေ အလုပ်ရရှိရေး၊ လစာ တူတူတန်တန် ရရှိရေးကို အကာအကွယ် ပေးထားပါတယ်။ (Supplementary Labour Scheme ကို S.L.S. လို့ ခေါ်ပါ တယ်။)
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားကို ငှါးယူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အလုပ်ရှင်က ဒီလောက် တင်းကြပ်မှု မရှိတဲ့ General Employment Scheme အောက်ကနေ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကို တင်ပြ တောင်းဆိုရပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာလည်း ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းက အလုပ်သမားတွေ အလုပ် လက်မဲ့တွေ များပြားလာနေတဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားသားတွေ ခေါ်ယူပြီး ငှါးရမ်းနေလို့ ဒီလို ဖြစ်ရတာဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုမျိုး လူထုကြားထဲမှာ ရှိနေလို့ ဒီလောက် ထိန်းကွပ်ထားတဲ့ ကြားက အစိုးရလည်း ဝေဖန်ခံနေရတာတော့ မလွတ်ခဲ့ပါဘူး။
ကိုယ့် နိုင်ငံသား ပဓာနဝါဒ (သို့) နိုင်ငံတချို့ရဲ့ ဖောရိန်းအလုပ်သမား ကန့်သက်ချက်များ(၁)
in Reader's Digest, ဇင်ဝေသော် - on 3/25/2013 - No comments
စီဒီပလေယားလေး တစ်လုံးလိုချင်လို့ ပရိုမိုးရှင်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ စူပါမား ကက် ဆီကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ မော်ဒယ်မှာ သူတို့ရေးထားတဲ့ စာတွေကို နားမလည်လို့ အရောင်းစာရေးကို ခေါ်မေးရတယ်။
" ဒါနဲ့ စီဒီပလေယားဘေးမှာ ရေးထားတဲ့ ' Hybrid pulse D/A converter' ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ" မေးတော့...
" ဆိုလိုတာက ဒီ စီဒီပလေယားဟာ စီဒီပြားပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် အမှတ်အသားတွေကို ဖတ်နိုင်တယ်၊ ဖတ်ပြီး အော်ဒီယို ( အသံဖြစ်အောင် ) ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်၊ ဒီလိုပါ " အရောင်းစာရေးက ရှင်းပြတယ်။
" ရှင်းရှင်းပြောရင် ဒီ စီဒီပလေယားက စီဒီဖွင့်လို့ရတယ်၊ ဒီလိုမဟုတ်လား " ဆိုတော့မှ
" အတိအကျပဲ " တဲ့။
(R.D, March,2005 )
ဖရီးသင့်ကား ( Free Thinker ) များလာရခြင်း အကြောင်းရင်းတစ်ခု
in ဇင်ဝေသော် - on 3/25/2013 - No comments
" ယဉ်ကျေးတဲ့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံကြီးတွေဟာ သူ့လူမျိုးမဟုတ်၊ သူ့ပြည်တွင်း မှာ မွေးတာလည်းမဟုတ်၊ ကိုးကွယ်မှုချင်း လုံးဝမတူမှန်းလည်းသိတဲ့ သူများနိုင်ငံတွေက ဒုက္ခသည်တွေကို ကိုယ်တာတွေထားပြီး ဘာလို့များ နှစ် စဉ် လက်ခံနေကြတာပါလိမ့်"
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က ယူကေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ပါလာတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက ဒီနှစ်တွေမှာ ဖရီးသင့်ကားတွေ ပိုလို့တိုးပွားလာနေတယ်တဲ့။ ယူကေမှာဆိုတော့ ဒီ ဖရီး သင့်ကားတွေ ဘယ်ကခွဲထွက်လာတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားရတာ သိပ် မခက် လှပါဘူး။ မဆိုစလောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ကိုလိုနီပါ အိန္ဒိယန်း ဟိန္ဒူတချို့ကလွဲ ရင် ခရစ္စယန်နဲ့ အစ္စလမ်က ( ခရစ္စယန်ထဲက ပိုများနိုင်တယ် ) ခွဲထွက် လာ တာတွေပဲ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ဖရီးသင့်ကားဖြစ်ကြရတာလဲဆိုတဲ့ အဖြေကတော့ အများကြီး ရှိနေနိုင်ပါတော့တယ်။
သေချာတာက ဘာသာရေး အဆုံးအမတွေအပေါ် သံသယရှိမှု၊ ကောင်းေ နပြီးတာပဲ ဘာသာမရှိလည်း ပြဿနာမရှိဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှု၊ နောက်ပြီး ဘာသာရေးနောက်ခံ အကြမ်းဖက်မှုတွေလည်း သေချာပေါက် ပါနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရကို ပေးရမယ့်အခွန်ကိုမပေးလို့ အဖမ်းခံရနိုင်ပေမဲ့ ဘယ်ဘာသာကိုမှ မကိုးကွယ်လို့တော့ လာဖမ်းလို့ မရဘူးလေ။
အကြမ်းဖက်မှုတိုင်းမှာ ဟိုဖက် ဒီဖက် ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေ ရှိနေ ကြတာချည်းပါပဲ။ သူမှန် ငါမှန်က တုတ်ထမ်း ဓားထမ်းငြင်းမှရတာမျိုးပါ။ ဘယ်တော့မှလည်း တုတ်၊ ဓားနဲ့ အဖြေရှာလို့ မရတတ်ဘူး။
မိတ္ထီလာကနေ ရမည်းသင်းကို ကူးသွားတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ဘာတွေ မခံမရပ်နိုင်အောင်လုပ်ထားလို့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာ ရမည်းသင်းမှာ မနေဖူးသူတွေ ကျကျနန မသိနိုင်ဘူး။ ဒီ မခံမရပ်နိုင်မှုတွေ ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ဒီမိုကရေစီကို စောင့်နေကြရတာလား၊ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီမိုကရေစီလည်း ဓားစားခံ ( ဒုတ်စားခံလို့ ခေါ်ရင်လည်း ရမယ်ထင်တယ် ) ဖြစ်သွားရပြန်တယ်။ ပြီးတော့ ရှေ့ ခြေတစ်လှမ်းတက်လာတဲ့ နိုင်ငံတော်ဟာ နောက်တစ်လှမ်း ( တချို့က နှစ်လှမ်းလို့တောင် ပြောကြတယ် ) ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။
ယဉ်ကျေးတဲ့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံကြီးတွေဟာ သူ့လူမျိုးမဟုတ်၊ သူ့ပြည်တွင်း မှာ မွေးတာလည်းမဟုတ်၊ ကိုးကွယ်မှုချင်း လုံးဝမတူမှန်းလည်းသိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကိုယ်တာတွေထားပြီး ဘာလို့များ နှစ်စဉ် လက်ခံနေကြ တာပါလိမ့်။
ဆိုက်ပရပ်ကိစ္စက ပိုကြီးကျယ်နေတော့ မြန်မာ့သတင်းက ( တစ်ပိုင် တစ်နိုင် ကိုယ့်အသံနဲ့ကိုယ် အော်နေကြရတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကလွဲရင် ) အင်္ဂလိပ်လို သတင်းစာတွေမှာ ဒုတိယနေရာ ရောက်သွားတယ်။
ကံကောင်းတယ် လို့ ပြော ရမလား၊ ကံမကောင်းတာတော့ သေချာတယ်။
ဒီလိုတွေ ကြုံတွေ့ရတာများရင် ကမ္ဘာမှာ ဖရီးသင့်ကားတွေ ပိုများလာမယ်ဆို တာ ဗေဒင်မေးစရာ မလိုလောက်ဘူး။ ဘာသာရေး ပြဿနာတွေ လတ်တလော ပြေလည်ဖို့ အဖြေရှာတွေ့ကြသေးဟန်လည်းမတူသေးဘူး။ အရင်က ဘာသာရေးအခြေခံ ပြဿနာတွေဆိုတာ နယ်ချဲ့မှုတွေနဲ့ ရောထွေးနေတယ်။ အခုလည်း နယ်မြေလုမှုက မပြီးသေးဘူး၊ ဒါ့အပြင် အခု ဘာသာရေးပြဿနာတွေက ဒုတ်၊ ဓား၊ မီးတုတ်၊ မုဒိမ်းကျင့်၊ အလံမီးရှို့၊ ရုပ်တုဖျက်ဆီး၊ လက်ဖြစ်ဗုံး၊ စက်ဖြစ်ဗုံး၊ ကားဗုန်း၊ လေယာဉ်ဗုံး ၊ ရော့ကက်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပါပဲ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်သူတို့ထံမှာ အနုမြူဗုံး ရှိကြသေးဟန် မတူဘူး။
ဤသို့ သတ်ကြပုတ်ကြဖြင့် အတန်ကြာသောအခါ..............
in စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, သီဟနာဒ - on 3/24/2013 - No comments
"Kyaw Winmyint: သော ကြာ နေ့ ဆို ရင် နေ့ လည် 12:15 မှ 1:45pm ခန့် အ ထိ လောက် ပါ ။ အ ချိန် လွဲ နေ တော့ ဒါ မ ဟုတ် လောက် ပေ ဘူး
2 hours ago via mobile · Unlike · 2"
ကိုကျော်ဝင်းမြင့်၏ အထက်ပါ ကွန်မင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလို့ရသမျှ ရှင်းပြ ချင်သည်။ အသေးစိပ်များကား ကော်မတီထဲမှာပင် ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
၁ ။ ယင်း ဗလီ၏အမည်မှာ Masjid Darul Aman ဖြစ်ပြီး လိပ်စာက1, Jalan Eunos ဖြစ်သည်။
၂ ။ အစ္စလမ်တရားပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး
Talk on "Islam" Our way of life
1 ) The meaning of Islam
2 ) The basic teaching of Islam
3 ) Who are Muslims?
4 ) Why Islam is still relevant today.
5 ) Islam the most misunderstood and underrated religion.
6 ) Qs and As
By Mr Haron Akhtar,areligious teacher.
Sun day, 31st of March,
Venue: Mangala Hall
Time 12:45 pm to2pm.
၃ ။ (ကားပါကင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ) အထက်ပါ ကွန်မင့်ရှင်က မြန်မာပြည်ထဲမှ ဆိုလျှင် စင်္ကာပူမှာရှိနေသော ဗလီ၊ ချပ်ကျောင်းနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတို့ လည်ပတ်နေပုံကို ကျကျနန မသိနိုင်လောက်ပေ။ မိမိတို့ကျောင်းမှာပင် တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလျင် နံနက် ၉ နာရီမှာစသော ဆန်းဒေး ဓမ္မသင်တန်းများ၊ ပါဠိကောလိပ်တန်းများ ၊ ဘုရားရှိခိုး၊ တရားထိုင်၊ ပဋ္ဌာန်းရွတ်တို့ဖြင့် ည ၉ နာရီရောက်မှ ပြီးဆုံးသည်။ ထို Masjid Darul Aman ဗလီမှာလည်း သော ကြာနေ့များတွင် တစ်နေ့လုံးလိုလို လူစည်ကားနေသည်ကို တွေ့ရပါ၏။
Unlikely ( ဖြစ်နိုင်ခြေ သိပ်မရှိ )
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 3/24/2013 - No comments
ယခုလ ( မတ်လ ) ၃၁ ရက်နေသည် ငါးရက်မြောက် တနင်္ဂနွေဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပုံမှန်လည်ပတ်နေသည်ထက် တနင်္ဂနွေ တစ်ရက် ပိုနေ သည် ။ ထို့ကြောင့် ဘာသာဝင်အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်၊ တစ်ဘာ သာကို တစ်ဘာသာ ပိုမိုနားလည် သည်းခံနိုင်ကြစေရန် ရည်စူးပြီး အစ္စလာမ် ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်း၌ ဖိတ်ကြားပြီး အစ္စလာမ်ကိုး ကွယ်ယုံကြည်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာများကို ပြောဟောပေးရန် ဖိတ် ကြားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဤသည်ကပင် စင်္ကာပူ၏ အခြေခံမူပင်ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်သော စနစ် ဟု လည်း ထင်မြင်မိသည်။
ယင်းကိစ္စကို ကော်မတီဝင်းများနှင့်် ဆွေးနွေးကြစဉ်
" ကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းမှာ အစ္စလာမ်ပညာရှင်တစ်ယောက်က အစ္စလာမ်ကိုး ကွယ် ယုံကြည်မှုအကြောင်း ပြောဟောခွင့်ရသလို ဗလီထဲမှာရော ဗုဒ္ဓဘာ သာပညာရှင်တစ်ယောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အကြောင်း ပြောဟောခွင့်ရနိုင်မလား " ဟု အစည်းအဝေး၌မေးရာ
ကော်မတီဝင်းများအာလုံး တညီတညွတ်တည်း "Unlikely. At least not now" ဟု ဖြေကြသည်။
သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းများမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းများအတွက် ထွေထွေ ထူးထူး ဘာသာရေး အက်တီဗီတီမရှိသော်လည်း မွတ်စလင်များအတွက် ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းများဖြင့် ဗလီထဲမှာ စည်းကားနေတတ်သည်။ မလှမ်းမကမ်းမှာရှိသော ဗလီတစ်ခုက သူတို့ဘာသာဝင်များအတွက် ကားရပ် ရန်နေရာ အခက်အခဲရှိသဖြင့် ကားပါကင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိသော မိမိနေ ထိုင်ရာကျောင်း၏ ကားပါကင်၌ သောကြာနေ့ ညနေတိုင်း ကားထား ခွင့် တောင်းခံလာကြသည်။ ကော်မတီနှင့်ဆွေးနွေးကြရာ အတူတကွ ညီညွ တ် စွာ ပူးပေါင်းနေထိုင်ရေး စင်္ကာပူ၏ဥပဒေနှင့်သော်လည်ကောင်း၊ လူသား ချင်း၊ ဘာသာချင်း ရိုင်းပင်းကူညီခြင်း အခြေခံ လူ့ဥပဒေနှင့် သော် လည်ကောင်း၊ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမနှင့်သော်လည်ကောင်း ညီညွတ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် သတ်မှတ်ပေးထားသောနေရာတို့၌ ကားရပ်ထားနိုင်ကြောင်း၊ ထို သတ်မှတ်ပေးထားသောနေရာတိုကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ရန် တာဝန်ရှိသူ တစ်ယောက် ကျောင်း ပရဝုဏ်ထဲမှာ ရှိနေရန်လိုကြောင်း၊ တစ်ခုခုဆို ထိုသူက ဖြစ်သမျှကို တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကားရပ်ထားခွင့် သည် ညနေ ၃ နာရီခန့်မှ ၇ နာရီခွဲခန့်အထိသာဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေထားကာ ခွင့်ပြုရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်။
" မိမိတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အခါကြီး ရက်ကြီးများမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ကားပါကင်အခက်အခဲ ရှိလာရင်ကော သူတို့ဗလီထဲမှာ ကားရပ်ထား ခွင့် ပြုလောက်သလား " မေးရာ
ရှေးနည်းအတိုင်းပင် ကော်မတီဝင်းများအာလုံး တညီတညွတ်တည်း "Unlikely" ဟု ဖြေကြသည်။
လီကွမ်းယုကတော့ အတူတကွ ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းနေထိုင်ရေးနှင့် ပတ် သက်ပြီး ၁၇ ရာစုဆန်သော အစ္စလမ်ယုံကြည်မှုကို စိုးရိမ်မိကြောင်း အမုန်း ခံ ပြောထားခဲ့သည်။ ဤ၌ ဘာသာရေး အဆုံးအမနှင့်လည်း မသွေ ဖည် ခေတ်နှင့်လျှော်ညီစွာလည်း နေထိုင်နိုင်သော အစ္စလမ်ဘာသာ ဝင်များ ကို မဆိုလိုပါပေ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ရာမှာ နှစ်ဖက်စလုံး အလျှာ့ပေးစရာများရှိနေသည်ကို လူတိုင်းသဘောပေါက်နိုင်သည်။
အထက်ပါ မိမိ၏ မေးခွန်း အဖြေသည် "Unlikely" ဖြစ်နေသော်လည်း သူတို့နှင့် ပို၍ရင်းနှီးလာသလိုခံစားရပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြုံး ချင်းဖလယ်မှုများလည်း ပို၍များလာခဲ့ကြသည်ကိုမူ ဝန်ခံရပါလိမ့်မည်။ ယုံကြည်မှု မတူကာမျှဖြင့် အမုန်းပွားနေရန်မလိုသလို ဘာကိုမှ မယုံကြည်သူ ကလည်း အခြားသူတို့ ယုံကြည်မှုအတွက် ဘာမှ ဝေဖန်နေစရာ မလိုတော့ပါ ။
တချို့လူ့အဖွဲ့အစည်းက လစ်ဘရယ်ဆန်ဆန် ဥပဒေကို တောင်းဆိုသော် လည်း တချို့လူ့အဖွဲ့အစည်းက ပို၍တင်းကြပ်သော ဥပဒေကိုတောင်းဆိုနေ ဟန်ရှိသည်။ စင်္ကာပူက ဤဟန်ချက်ကို ကောင်းကောင်း ထိန်းထားနိုင်ဆဲဖြစ် သည်ဟု တွေ့မြင်ရပါသည်။
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 3/23/2013 - No comments
မနေ့က သတင်းစာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစု နိုင်ငံထဲက ဗလီကို မီးရှိ့နေ တဲ့ သတင်းနဲ့ မွတ်စလင်နိုင်ငံထဲက ခရစ်ယန်ချပ်ကျောင်းကို စက်ကြီးနဲ့ထိုပြီး ဖြိုနေကြတဲ့ သတင်းနှစ်ပုဒ် တွဲလျက်ပါလာတယ်။
နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံကလည်း ကိုးကွယ်မှုဘာသာတရားအနေနဲ့ အစ္စလာမ်နဲ့ ခရစ္စယန်ကိုပဲ အသိအမှတ်ပြုနိုင်မယ် တဲ့။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ နေကြရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အထူးသဖြင့် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမှာ အများနဲ့ ရောလို့မရတဲ့ ရဟန်းတွေရဲ့ဘဝဟာ ကျီးလန့်စာစားပဲ။
အဲ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ဘုရားကျောင်းကန်တွေလည်း ပိုပြီး မလုံခြုံတော့ဘူး။
ဟို အရင်က ပြည်တွင်းမှာ ကုလား ဗမာ အရေးအခင်းဖြစ်တော့ ဘင်္ဂလားေ ဒ့ရှ် မှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတွေ အသတ်ခံခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းတွေ မီးရှို့ ခံခဲ့ရတယ်။
အန္ဒိယထဲမှာကျတော့ ဟိန္ဒူတွေက ဇာတ်စနစ်နဲ့ မောက်မာပြီးမွတ်စလင်တွေ က ပေါင်းလို့သင်းလို့ ပိုကောင်းတယ်ဆိုလား။
ဘာပြောရမှန်းမသိအောင် ရှုပ်ထွေးလှတယ်။ သေချာတာကတော့တစ်နေရာ မှာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် အခြားတစ်နေရာမှာ တန်ပြန်အကျိုးရှိနေတတ်တယ် ဆို တာပါပဲ။
ဒီခေတ်မှာ ကံအကျိုးပေး ဆိုတာထက် မီဒီယာအကျိုးပေးက ပိုမြန်နေတတ် တယ်။
ဘာသာတရားတိုင်း ငြိမ်ချမ်းရေးကို ဆောင်နိုင်ပါစေ။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိမှာတော့ ဆေးကြောင့် လေးနေကြဆဲ။
လူစိမ်းမှ လူရင်းသို့ ( ၇း၅ )
in Hard Truths By Lee Kuan Yew, ဇင်ဝေသော် - on 3/23/2013 - No comments
"ဒါပေမဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ မလေးလူမျိုးတွေက တရုတ်လူမျိုးတွေ၊ အိန္ဒိယန်းလူမျိုးတွေကို သူတို့နိုင်ငံသားလို့ မထင်ကြဘူး။ သူများမြေပေါ် ခဏလာနေတဲ့လူတွေဆိုပြီး မောင်းထုတ်ကြတယ်လေ။ သူတို့ မောင်းထုတ် လို့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ကို ငါတို့က စတင် အသုံးပြုခဲ့ရတာ" (လီကွမ်းယု)
မေး ။ ။ စင်္ကာပူရဲ့ အမှတ်အသားက ဘာလဲ။ လူတွေ အများကြီးထဲမှာ ဒီ လူဟာ စင်္ကာပူးရီးယန်းလို့ ဘယ်ဟာကို ကြည့်ပြီး ခွဲခြားမလဲ။
ဖြေ ။ ။ မင်းက နိုင်ငံအမှတ်အသားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးတော့ ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့် ငါ ဖြေမှ ရမယ်။ နိုင်ငံရဲ့ အမှတ်အသားဆိုတာ အနေအထား အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အမျိုးအမျိုး ကွဲလွဲနိုင်တယ်။ ဗြိတိသျ အင်ပါယာလက် ထက်က ဝေလတွေ၊ အိုင်းရစ်တွေ၊ စကော့တလန်လူမျိုးတွေအားလုံး သူတို့ ကိုယ် သူတို့ ဗြိတိသျလို့ ခံယူကြတယ်။ ဗြိတိသျအင်ပါယာလည်း ပြိုကွဲရော “ငါက ဝေလလူမျိုး၊ ငါက အိုင်းရစ်လူမျိုး၊ ငါက စကော့တလန်လူမျိုး၊ ငါတို့ ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်မှုတွေ လိုချင်တယ်။ အဘာဒီး(န်) မှာထွက်တဲ့ ရေနံတွေ ငါတို့ ပိုင်တယ်” ဆိုပြီး တောင်းဆိုကြပါလေရော။
ဒါ့ကြောင့် လေဘာအစိုးရက သူတို့ကို ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ခွင့်တွေ ပေး လိုက်ကြတာ။ ဒီထက်ပိုပြီး ကွဲလာကြရဦးမယ်။ အခုဆို စကော့တလန်တွေ လွတ်လပ်ရေးကို ထောက်ခံတဲ့ ပါတီတွေတောင် ရှိနေပြီ။ မင်းပြောတဲ့ အမှတ် အသား ဆိုတာက ပြောင်းနေတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ အနေ အထားတွေ ကြားမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အမှတ်အသားကဘာဖြစ် လာမလဲ။လူမျိုးပေါင်း စုံကို လက်ခံနိုင်မှု၊ လူမျိုးစုတွေရဲ့ ခြားနားချက်ကို နားလည်သည်းခံပေးမှု၊ ဘာသာ စကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတိုင်းကို နားလည်ပေးမှု၊ အညီအမျှ ယှည်ပြိုင်ခွင့်ရှိမှု၊ ဒါတွေပေါ့။ ဒါတွေကြောင့်ပဲ စင်္ကာပူဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင် ငံတွေထက် ခေါင်းတစ်လုံး ပိုမြင့်နေတာ။
အင်ဒိုနီးရှားမှာဆိုရင် တရုတ်လူမျိုးတွေကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ သူတို့ လူမျိုးအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုဘူး။ တရုတ်တွေဟာ သူတို့နာမည်တွေကို ပရိဘူမိခေါ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနာမည်တွေနဲ့ ပြောင်းယူရတယ်။ ဒါတောင်မှ သူ့ လူမျိုးပါလို့ အသိအမှတ် မပြုသေးဘူး။အခု တရုတ်ပြည်က တက်လာတော့ မှ တရုတ်ကျောင်းနဲ့ တရုတ်ရုပ်သံဌာနကို ပြန်ခွင့်ပြုပေးထားတာ။ Jusuf Kalla ဆိုရင် သမ္မတရွေးချယ်ပွဲမှာ ဂျဗားလူမျိုးမဟုတ်လို့ မဲ (၁၂) ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရတယ်။
ဒါဆို အင်ဒိုနီးရှားမှာရော နိုင်ငံတော်အမှတ်အသား ရှိသလား။ ရှိတယ်။ သူတို့ က အင်ဒိုဘာသာစကားကို အားလုံး ပြောကြတယ်။ ဒီအပြင် ဘာရှိဦးမလဲ။ အရေးပါတဲ့ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရတဲ့ ဌာနတွေမှာ သူတို့လူမျိုးတွေ၊ ကာကွယ်ရေး ထဲမှာ သူတို့လူမျိုးတွေ၊ Guinea လို နေရာမျိုးမှာ လူနည်းစုလေးပင် ဖြစ်စေ၊ သူတို့ဟာ အင်ဒိုနီးရှားတွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ခွဲခြား ထားလို့ မရဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့လည်း နိုင်ငံငံရဲ့ သင်္ကေတရအောင် လုပ် ယူနေရဆဲလို့ ငါထင်တယ်။
ရှေးဟောင်းနိုင်ငံကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဂျပန်တို့၊ တရုတ်တို့ကျတော့ “နေးရှင်း” ကို စနစ်တကျ တည်ဆောက်ပြီးကြပြီ။ သူတို့ “နေးရှင်း” ဆိုတာရဲ့ သတ်မှတ် ချက်က လူမျိုးတစ်မျိုး၊ ဘာသာစကားတစ်ခု၊ ယဉ်ကျေမှုတစ်ခု၊ ကိုးကွယ်မှု တစ်ခုပဲ။
အဲသလို အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတာ နိုင်ငံဘယ်လောက် ရှိနိုင်မလဲ။ ဂျပန်ကွာ၊ တရုတ်ပြည်မကြီးကွာ၊ (ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့တွေကို ထည့်တွက်လို့ မရဘူး)
ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမှ ဂျာမနီနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီက ဂျာမနီကွာ။ ဒီနေ့တော့ ဂျာမနီလည်း ပြောင်းသွားပြီ။ သူတို့နဲ့ တစ်သားတည်း ဖြစ်မသွားပေမဲ့ ဖိအားတွေကြောင့် တူရကီလူမျိုးတွေကို ဂျာ မနီနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုပေးနေရပြီ။
ဆွီဒင်ဆိုရင်လည်း ဆိုမာလီတွေ၊ သီရိလင်္ကာက တမီးလ်တွေ စတာတွေကို ဒုက္ခသည်တွေအဖြစ် လက်ခံထားရတယ်။ သူတို့ရော ဆွီဒင်လူမျိုးတွေ ဖြစ် လာနိုင်သလား။ မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ လိုလိမ့်မယ်။ ဆွီဒင်လူမျိုးအနေနဲ့ သူတို့ကို လက်ခံမလား။ တရားဥပဒေအားဖြင့်တော့ အသိအမှတ်ပြုခံရမယ်။ အလုပ်မရှိရင် ထောက်ပံ့ကြေးရမယ်။ အစိုးရရဲ့ အကူအညီတွေရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆွီဒင်လူမျိုးတွေရဲ့ အတွင်းစည်းထဲတော့ မရောက်နိုင်ဘူး။
စင်္ကာပူးရီးယန်းတစ်ယောက်ရဲ့ ရှိရမယ့် သင်္ကေတအပေါ်မှာ ငါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုတာက သူများနိုင်ငံတွေနဲ့ မတူဘူး။ ငါတို့နဲ့ ပေါင်းစည်းလာတဲ့ ဘယ်သူ့ကို မဆို ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းပဲ။ အဲဒါက အမေရိကန်တွေရဲ့ မူဝါဒ။ မင်း နာမည် ပြောင်းစရာမလိုဘူး။ Brzezinski လား။ Berlusconi လား … လာခဲ့ ရတယ်။ လာသာ ပေါင်းလှည့် မင်းဟာ အမေရိကန်ပဲ။ အဲသလိုပဲ။ တို့မှာ အရည်အချင်းရှိသူတွေ လိုတယ်။ သူတို့ကို ကြိုဆိုရမယ်။ အဲ့ဒါသည်ပင် သူ မတူတဲ့ ငါတို့ ဂုဏ်ရည်တစ်ခု ဖြစ်နေရမယ်။
အဲဒီဂုဏ်ပုဒ်သာ မရှိရင် တို့လည်း သူများတွေလိုပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ကဲ … ဒါဆိုရင် စင်္ကာပူးရီးယန်းတရုတ်က တရုတ်ပြည်ကြီးက တရုတ်နဲ့ တူသလား။ စင်္ကာပူးရီးယန်း အိန္ဒိယန်းက အိန္ဒိယမှာနေတဲ့ အိန္ဒိယန်းတွေနဲ့ တူသလား။ မလေးရှားကမလေးတွေ အခုငါတို့ ကလေးတွေနဲ့ မတူတော့ဘူး။ မင်းတို့ မိ ခင်ဘာသာစကားကို မမေ့စေနဲ့။ ဒါပေမဲ့ ရုံးသုံးစကားကတော့ အင်္ဂလိပ်ပဲ။ ဒီပြင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာက တို့လောက်တော့ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့နဲ့စီးပွားရေး စကား ပြောရတော့မယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်လို ပြောလို့ရတယ်။
မေး ။ ။ အမေရိကန်အများစုက အမေရိကဆိုတာ ကမ္ဘာ့လူသားတိုင်းရဲ့ အခွင့်အရေးများ ပေးရာမြေလို့ သူတို့နိုင်ငံကို သူတို့ ယုံကြည်ထားကြတော့ အမေရိကအတွက်ဆို အသက်ပေးရဲကြတယ်။ စင်္ကာပူးရီးယန်းတွေဆီမှာ အဲ့ သလို စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေ တွေ့ရသလား။
ဖြေ ။ ။ ဒီထက်သာတယ်။ တကယ့်ကို အံ့ဩဘနန်းပဲ။ ဒီနိုင်ငံထဲကို ဝင် လာ ကတည်းက သူမတူတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ သာမန်သူလိုငါလို အဖွဲ့ အ စည်း မဟုတ်ဘူး။ ကံကောင်းထောက်မလို့လည်း ဒီပုံစံ ဖြစ်လာတာ။ ပြီးတော့ မှ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ စူးစမ်းမျှော်မြင်မှုနဲ့ နိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့ ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေ။ ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ခရီးသွားနိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူများတွေနဲ့ မတူတဲ့ အရည်အသွေး ရှိနေမှသာ စင်္ကာပူဟာ လုံ ခြုံအေးချမ်းမယ်လို့ ငါယုံကြည်ထားတာ။
မေး ။ ။ မစ္စတာလီ ငယ်စဉ်က ပထမ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံ၊ နောက်ပြီး ဂျပန်လက်အောက်ခံ၊ နောက်ဆုံး မလေးရှားထဲ ရောက်သွားပြန်ရော။ ကိုယ့် ကိုယ်ကို စင်္ကာပူးရီးယန်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် မြင်မိတာလဲ။ စင်္ကာပူးရီးယန်းဖြစ်ရတာကရော မစ္စတာလီအတွက် ဘာအဓိပ္ပါယ်ရှိသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ငါက စင်္ကာပူးရီးယန်းစစ်စစ်လို့ ပြောလို့ မရဘူး။ အမှတ်တမဲ့နဲ့ စင်္ကာပူဆိုတဲ့ အမြုတေလေးကို ငါ ပြုစုပျိုးထောင် ကြည့်မိတယ်။ အဲဒီ အမြုတေလေးက စင်္ကာပူးရီးယန်းဆိုတာကို ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ မှန်တယ်။ ဗြိ တိသျလက်အောက်ခံအနေနဲ့ ကြီးခဲ့ရတယ်။ ငါ့အဖေက စင်္ကာပူမှာ အလုပ် လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါ့အဖိုးက ဂျာဗားက သကြားဘုရင် Oei Tiong Han ပိုင်တဲ့ Heap Eng Mo သဘောင်္လိုင်းမှာ အရာရှိ၊ ငွေထိမ်းရတယ်။ သင်္ဘာခရီးစဉ်ေ တွ ဆွဲရတယ် (Purserလို့ ခေါ်ပါတယ်)။ နောက်ပြီးတော့ အေးဂျင့်လုပ် တယ် ။ စင်္ကာပူရှေ့နေအဖွဲ့မှာ အရေးပါသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
အရောင်းအဝယ်လုပ်ရင်း သူ ငွေတော်တော် စုမိသွားတယ်။ Semarang မှာ ငါ့အဖွားကို လက်ထပ်ပြီး ဒီကို ခေါ်လာခဲ့တယ်။ ငါ့အဖေက Semarang မှာ မွေးခဲ့တာ။ သူငယ်စဉ်မှာပဲ စင်္ကာပူကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူ့အဖေက ဗြိ တိသျှ လက်အောက်ခံဆိုတော့ ငါ့အဖေကလည်း အလိုအလျှောက် ဗြိတိသျှ လက်အောက်ခံလေး ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာပဲ ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။ Neil Road မှာ ကလေးဘဝက ငါနေစဉ်က တို့အိမ်မှာ ဂျာဗားက အိမ်ဖော်ေ တွ ရှိတယ်။ သူတို့က မလေးတွေထက် ပို အလုပ်လုပ်တယ်။ ငါ့အဖွားဆိုရင် ဂျာဗားဘာသာစကား ပြောတတ်တယ်။ ငါကိုယ်တိုင် စင်္ကာပူးရီးယန်း တစ်ယာက်လို့ ခံယူမိသလား … “နိုး” ပဲ။
ငါ့အဖေက Shell (ရေနံကုမ္ပဏီ) မှာ အလုပ်လုပ်တော့ ဂျိုဟိုး၊ ပါတုပါဟတ် ၊ ကောင်တန်တို့ကို သွားရတာပေါ့။ ငါကျောင်းနေတဲ့ အရွယ်တုန်းက အဖေနဲ့ အတူ လိုက်လိုက်သွားတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ အဲဒီနေရာတွေအားလုံးဟာ အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုတည်းအောက်မှာပဲ ရှိတယ်။ တစ်လျှောက်လုံး ကားမောင်း သွား၊ အခွန်ကောက်တာမရှိ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလည်း မရှိဘူး။ ငါ့ကိုယ်ငါ မလေးရှားလူမျိုးလို့ ထင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ မလေးလူမျိုးတွေက တရုတ်လူမျိုးတွေ၊ အိန္ဒိယန်းလူမျိုးတွေကို သူတို့နိုင်ငံသားလို့ မထင်ကြဘူး။ သူများမြေပေါ် ခဏ လာနေတဲ့လူတွေဆိုပြီး မောင်းထုတ်ကြတယ်လေ။ သူတို့ မောင်းထုတ်လို့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ကို ငါတို့က စတင် အသုံးပြုခဲ့ရတာ။ မင်းက စင်္ကာပူနိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲလို့ မေးခဲ့တယ်။ အခု ငါပြောခဲ့တာတွေဟာ အခြေခံ အကြောင်းတရားတွေပဲကွ။ အဲဒီအချက်တွေမရှိဘဲ စင်္ကာပူလည်း မရှိနိုင်ဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်မြဲမြဲ တွဲမသွားရင် စင်္ကာပူလည်း မရှင်သန်နိုင်ဘူး။
မေး ။ ။ အစပိုင်းကာလတုန်းကတော့ စင်္ကာပူးရီးယန်းတစ်ယေက် အဖြစ် ရွေးစရာ မရှိလို့ ရွေးခဲ့ရတဲ့သဘောပေါ့။ ဒါနဲ့ စင်္ကာပူးရီးယန်းဆိုတဲ့ အ သိ ဦးနှောက်ကနေ နှလုံးသားထဲရောက်လာအောင် ဘယ်အချက်တွေ က ပြောင်းလဲပေးခဲ့တာလဲ။
ဖြေ ။ ။ ငါ့စိတ်ကိုငါ အဲသလောက် စူးစမ်းမနေနိုင်ပါဘူးကွာ။ ငါသိတာက ငါတို့ကို ငါတို့ စင်္ကာပူးရီးယန်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်အသားထားမှ ရကို ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံသားကဒ် ထုတ်ရတာပဲ။ မလေးရှားက စင်္ကာပူမလေးရှားနယ်ခြားမှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အကောက် အခွန်ဌာနလည်း ဖွင့်ရော ငါတို့လည်းသူတို့လုပ်သလို တုန့်ပြန်ပေးလိုက် တယ်။ အခုဆိုရင် မင်းနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြမှ သွားလို့ရတယ်။ ဟိုတုန်း က ဘာမှ မလိုဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမူကို ငါက ကြိုဆိုတယ်။ အဲသလို မဟုတ်ခဲ့ရင် စင်္ကာပူ မလေး ရထားလမ်းတစ်လျှောက်လုံးက ရထားလမ်းပေါ်မှာ မလေးတွေနဲ့ ပြည့်နေ မယ်။ ဒီမှာ အလုပ်လုပ်ရင် ပိုက်ဆံပိုရတယ်လေ။ အဲဒါ သမိုင်းပါပဲ။ ဒါနဲ့ နိုင်ငံ သားကဒ်တွေ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီကဒ်လေးကို ကောင်းကောင်း အ သုံးချကြပေါ့။
(အခန်း ၇ ပြီး။ )
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 3/22/2013 - No comments
One of the best -- and cheapest -- ways to become healthier and happier is through mindfulness exercises like meditation. Mark Williams isaprofessor of clinical psychology at Oxford, an expert in mindfulness-based cognitive therapy, and the co-author ofMindfulness: A Practical Guide to Finding Peace inaFrantic World. According to Williams, after nine weeks of training, participants inamindfulness program had "an increased sense of purpose and had fewer feelings of isolation and alienation, along with decreased symptoms of illness as diverse as headaches, chest pain, congestion and weakness."
One occupation known for burnout is physicians. Studies show that anywhere fromathird to half of them suffer from it. Buta2009 study in the Journal of the American Medical Association showed that doctors taking part in mindfulness exercises were less burned out. Even more dramatic was the fact that many of the improvements continued even after theyear-long study concluded.
Posted by:Arianna Huffington
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 3/22/2013 - No comments
လမ်းပေါ်မှာ ကုန်တင်ကားကြီးတွေ၊ ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ ကားတိုက်မှုဖြစ်ရင် ကုန်တင်ကားကြီးတွေ၊ ဘတ်စ်ကားတွေက သူတို့ရှေ့မှာရိုတဲ့ကားတွေကို ဝင် တိုက်တာများတယ်။ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က အဲသလို ဝင်တိုက်မှုတွေ တဲ့။ ကဲ ဒါတော့ သူတို့ ပြောမှလား။
ဒီထက်အဓိပ္ပါယ်ပိုရှိတာလေးဆို ပိုမကောင်းဘူးလား။ ဥပမာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လုံးမှာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရင် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးပြဿနာတွေဖြစ်တတ် တယ်ဆိုတာမျိုးလေ။
"ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ငှက်ပြောသီးစားချင်လို့ သွားဝယ်တယ်၊ ငါရောက်မှ ငှက်ပြောသီးကုန်သွားတယ် တဲ့။ ဘယ်နည်းနဲ့မှ သည်းခံလို့ မရတဲ့ကိစ္စ။ ဒီဆိုင်ကို မီးရှို့ရမှ ကျေနပ်မယ်"
"မုန့်ဟင်းခါးသည်ကောင်မလေးက ငါရောက်မှ ဆိုင်သိမ်းတယ်။ ခွင့်လွှတ်မရ တဲ့ ပြစ်မှုပဲ၊ လူစုပြီး ဒင်းကို အဓမ္မကျင့်ရမှ ကျေနပ်မယ်"
"ဒီ သံမှူးက ငါတို့ တမန်တော်ရဲ့နာမည်ကို အသံမှန်အောင် မထွက်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာ ခွင့်လွှတ်လို့ မရတဲ့ ဘာသာရေး စော်ကားမှုကြီးပဲ၊ အဲဒီ သံရုံးကို မီးရှို့ ကြ"
"ဘယ်သူက ဖန်တီးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာသာရေးစော်ကားတဲ့ ခြောက် စက္ကန့် ကြာ ဗွီဒီယိုအတွက် လူခြောက်သန်း ဒုက္ခရောက်ရမှ ကျေနပ်နိုင်မယ်။ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ သံရုံးတိုင်း၊ အလံတိုင်းကိုမီးရှို့။ သံအမတ်နဲ့ မိသားစုကိုပါ သတ်"
"သူများဘာသာရဲ့ အထွတ်အမြတ် ရုပ်ထုတွေ ငါတို့ ကြိုက်သလို လုပ်ခွင့်ရှိ တယ်၊ ငါတို့ဘာသာကိုတော့ လာမထိနဲ့"
ဒီလိုလူတွေနဲ့ကမ္ဘာဟာ ဘယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါ့မလဲ။
အဆုံးအမတွေကို လေးစားပါတယ်။ ရန်မူလိုစိတ်တွေနဲ့ လူရမ်းကားတွေ ထွက်ထွက်လာတာကလည်း ဒီအပေါက်ကပဲ။ ဒီအတွက် ကမ္ဘာသက်သေ။
သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ထက် ဘာသာဝင်တိုးပွားဖို့ အားပေးတဲ့ ဘာသာတိုင်း ဟာ ဘာသာအမည်ခံတဲ့ စစ်ပွဲဖန်တီးသူတွေပါပဲ။
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 3/22/2013 - No comments
ဒီနေ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာအရေအတွက် ဘယ်ေ လာက် များနေပြီလဲ။ ဒီအဖြေက ဘယ်သူ့ဆီမှာမှ တိတိကျကျ မရှိတာ သေ ချာတယ်။ စင်္ကာပူ တစ်မြို့တည်းမှာကိုပဲ မြန်မာ သံရုံးက ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်း နဲ့ အမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့ လူဦးရေက ဘယ်တော့မှ ထပ်တူကျနိုင်တာ မဟုတ် ပါဘူး။
အမေရိကရောက်သူ၊ ဥရောပရောက်သူ၊ ဩစတေးလျရောက်သူ၊ ဂျပန်၊ကိုရီး ယား၊ စင်္ကာပူစသည် ရောက်နေသူတွေ အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ လားရာ နိုင်ငံတွေကွဲကွဲ သူတို့ ထွက်ခွါရာကတော့ မြန်မာ ဆိုတဲ့ တတိယနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံကပါ။ ဒီတော့ ပထမကမ္ဘာက တတိယနိုင်ငံ သားတွေပေါ့။
စင်္ကာပူမှာ ဒီနှစ် ပိုပြီး လစာတွေမြင့်လာရမယ်၊ ခရိုက်တီးရီးယာတွေ မြင့်လာ ရမယ်၊ လက်ရှိအလုပ်သမားတွေထဲက ဒီစံတွေကို မမီတဲ့ နိုင်ငံခြား အလုပ် သမားတွေ တစ်ဝက်လောက် လျှော့ချဖို့ စတင်နေကြပါပြီ။ ဒီမူနဲ့ ပတ်သက်လို့ စင်္ကာပူဟာ နိုင်ငံခြား အုပ်သမားတွေအပေါ် လိုတစ်မျိုး မလိုတစ်မျိုး ဆို တဲ့ ဝေဖန်သံတချို့လည်း ခံနေရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီလိုပြောလာနိုင်တယ် ဆို တဲ့ လိပ်ပြာ မလုံ့တလုံ ခံစားချက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ စထရိတ်တိုင်းက သူတို့မူကို ကာကွယ်ဖို့ ဆောင်းပါးရှည်တစ်ပုဒ်ဖော်ပြလာတယ်။ သူတို့ ဆောင်းပါးကို ကိုးကားရင်း နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေရဲ့ ဘဝအစိတ်အပိုင်း တချို့ကို ထင်ဟပ်စေမယ့် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးမိပါ တယ် ။ ပြည်ပကိုထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်လိုသူတွေအတွက်လည်း အင်ဖို ခပ်ပါးပါး ရနိုင်တာပေါ့။
နိုင်ငံခြားသားတွေ အများကြီး ရောက်လာမှာကို စိုးရိမ်တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ စင်္ကာပူသာ ထီးထီးကြီး ရှိနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ ရှိနေပါ တယ်။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ ဗြိတိန်၊ ဩစတေးလျ၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ထိုင်း နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီအနေအထားကို ရောက်အောင် ဖန်တီးပေးတာကတော့ ကုမ္ပဏီတွေက အလုပ်သမားခ ဈေးချိုနိုင်သမျှ ချိုအောင် ရနိုင်ရေး ကြိုးစားချက်နဲ့ ကိုယ့်ပြည် သူပြည်သားတွေကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့ အစိုးရတွေရဲ့ တုန့်ပြန် ချက်တွေပါပဲ။ စိတ်ဝင်စားစရာ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက အမြတ်များများ ကျန်ချင်တယ်။ လုပ်အားခ လျော့ချချင်တယ်။ ဒီတော့ ဒီလုပ် အားဟာ ဖောရိန်းက လုပ်အားလား၊ ပြည်တွင်းကလုပ်အားလား ဆိုတာ စဉ်း စား မနေအားတော့ပါဘူး။ ဒါကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ အစိုးရပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ မူဝါဒပါပဲ။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗြိတိန်ဟာ တင်းကြပ်မှု အပြင်းထန်ဆုံး နိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဒီဥပဒေဟာ (၁၉၇၃) ခုနှစ်ကတည်းက ရှိနေခဲ့ပြီးသားပါ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံထဲကို အလုပ်ယာယီနဲ့ ဝင်လာရင်း အပြီးနေထိုင်ဖို့ ကြိုးစားလာကြလိမ့်မယ် ဆိုတာ ကလည်း သိပ်မမှားနိုင်တဲ့ တွက်ကိန်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား။ ဒါ့ကြောင့်ပါ။
ဒီတော့ ပြည်ထဲရေး (Home Office) ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာ UK Border Agency ဆိုတာ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ရတာပါ။ ဒီအေဂျင်စီကပဲ အလုပ်သမား ခန့်အပ်ဖို့ လျှောက်လွှာတိုင်းကို စစ်ဆေး ကိုင်တွယ်ပါတော့တယ်။ သူတို့မူ အရ ၂၀၀၈ - ခုနှစ်ကစလို့ ဗီဇာအဆင့် (၅) မျိုး (Five tiers) ခွဲခြား သတ် မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
နံပါတ် (၁) ဗီဇာအဆင့်ကတော့ အထူးချွန်းဆုံး၊ အတော်ဆုံးလို့ ဗြိတိသျ အစိုးရ ကလည်း ယုံကြည်၊ ကမ္ဘာကလည်း အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ ပညာ ရှင်၊ သိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ မီလျံနာသူဋ္ဌေးတွေပါ။ ဒီအုပ်စုကတော့ ဘာ စာရွက်စာ တန်း၊ ဘာအထောက်အထားမှ မလိုဘဲ အချိန်မရွေး ဗီဇာနံပါတ် (၁) ကို လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပျိုတိုင်းကြိုက် နှင်းဆီအုပ်စုပေါ့။
ဗီဇာအဆင့် (၂) နဲ့ (၃) ကတော့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေနဲ့ အ ထိုက် အလျှောက် အရည်အချင်းရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် ရည်စူးပါ တယ်။ သူတို့ကတော့ အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ် မလျှောက်ခင်မှာ အလုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီရဲ့ အလုပ်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ စာကို ပြသဖို့ လိုပါတယ်။
ဗီဇာ (၄) နဲ့ (၅) ကတော့ ဗြိတိသျမှာ ကျောင်းလာတက်တဲ့ ကျောင်း သားေ တွရယ်၊ အခြားကိစ္စမှာ အကြုံးဝင်သူတွေရယ်ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒီ ဗီဇာ လေးနဲ့ငါးဟာ အများအားဖြင့်တော့ ဗြိတိသျမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့် (တရား ဝင်) မရကြပါဘူး။
ဗီဇာအဆင့် နှစ်နဲ့သုံးကတော့ အလုပ်လုပ်ဖို့ ရောက်လာကြတယ် ဆိုတာ ဗေ ဒင်မေးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အစိုးရက ကန့်သက်ချက် လူဦးရေ ထုတ်ပြန်ပေးတယ်။ လူဦးရေ မပြည့်ခင် ကိုယ် က လျှောက်တယ်ဆိုရင်တောင် ဗီဇာ ရ၊ မရတော့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကံနဲ့ပဲ ဆိုင်နေပါတော့တယ်။
သူတို့ကို အလုပ်ခန့်မယ့် အလုပ်ရှင်တွေကလည်း နိုင်ငံခြားသားကို အလုပ် မခန့်မီမှာပဲ ဘော်ဒါအေဂျင်စီမှာ မှတ်ပုံအရင်တင်ပြီး ခွင့်ပြုချက်လည်း ရထား ပြီး ဖြစ်နေရပါမယ်။ ဒါက နှစ်စဉ် လုပ်ကို လုပ်ရမယ့် တာဝန်တစ်ခုပါ။ အဲ သလိုပဲ ဒီကုမ္ပဏီက နိုင်ငံခြားသား ဘယ်လောက် အလုပ်ခန့်ခွင့် ရှိတယ် ဆို တာကိုလည်း ဘော်ဒါအေဂျင်စီက နှစ်တိုင်း ကန့်သက် ထုတ်ပြန်ပေးပါတယ်။ ကန့်သက်ပေးထားတဲ့ ကိုယ်တာထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဗီဇာ ရ၊ မရ ကို ဘယ်သူမှ အာမ မခံနိုင်ပါဘူး။
ဒါတင် မကသေးပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသားကို ငှါးရမ်းမယ့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ လို အပ်နေတဲ့ လက်ရှိ အလုပ်ရာထူးအတွက် ဗြိတိန်လူမျိုး (သို့) ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေရဲ့ လူမျိုးတွေထဲမှာ ရှာလို့၊ ခန့်လို့ မရနိုင်ကြောင်း သက်ေ သ အထောက်အထားတွေနဲ့ ရှင်းပြကြရပါတယ်။
ဒီလို ကြိုးစားပြီး ဗြိတိန်လူမျိုး (သို့) ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေရဲ့ လူမျိုးတွေထဲမှာ ရအောင်ရှာ ပါတယ်ဆိုတာ သက်သေပြဖို့ ပြည်တွင်း သတင်းစာ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတင်းစာ၊ ဝက်(ဘ်)ဆိုက်တွေမှာ အ လုပ်ကြေညာ ခေါ်ရပါတယ်။ အလုပ်ကြေညာခေါ်ပြီး အနည်းဆုံး တစ် ပတ် စောင့်ရတယ်။ အလုပ်လာလျောက်သူတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတွေကိုလည်း ရက်ကော့ဒ် လုပ်ထားရတယ်။ ဒါတွေရှိတော့မှ နိုင်ငံခြားသားကို မခန့် မဖြစ်တော့တာကြောင့် ခန့်လိုက်ရပါတယ်လို့ ရှင်းပြလို့ ရတယ်။
သူတို့ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား သူတို့ ဗြိတိန်လူမျိုးတွေကို အမှန် တ ကယ်ပဲ ခန့်အပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကို အတည်ပြု၊ ဆုံးဖြတ်ဖို့ကတော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
တရုတ်ဒိုင်ယာလက်စကား ပြောတတ်သူကို လိုအပ်နေလို့ ခန့်ရတာစတဲ့ ဆင်ခြေမျိုးတွေနဲ့ အလုပ် မဖြစ်နိုင်သလို ဈေးချိုလို့ ငှါးရမ်းတာမျိုး မဖြစ် ရေ အာင်လည်း တားမြစ်ထားပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဝင်ငွေဟာ တစ်နာရီ မှာ အနည်းဆုံး (၆း၁၉) ပေါင် ရှိနေရပါမယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဥပဒေနဲ့ တားတား၊ တချို့ လစ်ဟာတာမျိုးလည်း ရှိနေတတ်ပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် ဗြိတိသျတက္ကသိုလ်တွေက ဘွဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဆိုရင် ဗီဇာသက်ညှာခွင့် ပြုထားလေတော့ တချို့ အလုပ်လုပ်ရင်း အမြဲနေ သွားတတ်တာတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။
အလားတူပါပဲ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ ဌာနချုပ်တွေက ဗြိ တိန်မှာ ရှိနေရင် သူတို့ အလုပ်သမားတွေကို အခြားနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ဌာနခွဲတွေ ကနေ ပြောင်းလွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယာယီသာ ခွင့်ပြုတာမျိုး ဖြစ်သလို သက်မှတ်ထားတဲ့ ကိုယ်တာလည်း ရှိနေမှပါ။
ဒီစစ်စတန်ကို ကုမ္ပဏီတွေကတော့ သဘောမတွေ့ကြလို့ တော်တော် ကျယ် ကျယ်လောင်လောင် ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ အခြားဌာနက အရာရှိတွေကို ဗြိတိန်မှာ တာဝန်ပြောင်းပေးဖို့ ဗီဇာလျှောက်ထားရတဲ့ အချိန်က လပေါင်း များစွာ ချီပြီး ကြာနေတာပဲ။ ဒါသာ ဖြစ်တယ်၊ ဒီနည်းလမ်းက အကုန်အကျ နည်းလှတယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဗီဇာအဆင့်နှစ် အလုပ်သမားတစ်ယောက် ကို ငှါးရမ်းဖို့ လယ်ဗီးကတင် ပေါင် တစ်ထောင်ပါ။
ဒါသာ ဖြစ်တယ်၊ အစိုးရမှာလည်း လူထုရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကနေ လွတ်နေ တာတော့ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အစိုးရရဲ့ မူဝါဒဟာ နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားတွေ ဝင်မလာနိုင်အောင် မတားမြစ်နိုင်ဘူးလို့ လူထုက ယုံကြည်ကြလို့ပါ။
သူတို့ပြောတဲ့ နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားဆိုတဲ့ အထဲမှာ ဗြိတိသျလူမျိုးတွေနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ (၂၆) နိုင်ငံက လူမျိုးတွေ မပါဝင်ပါဘူး။ သူတို့ကတော့ လာချင် ရင်လာ၊ အလုပ်လုပ်ချင်ရင်လုပ်၊ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 3/21/2013 - No comments
အမ ။ ။ ဟဲ့ မောင်လေး၊ နင်က ဘာဖြစ်လို့ မျက်နှာ ပုဝါကြီးစည်းထားရ တာလဲ။
မောင်။ ။ မျက်စေ့နှစ်လုံး အမြင် မရရင် အနံ့ခံတဲ့ အာရုံမှာ ပိုပြီးစူးရှတယ်ဆို လို့ စမ်းသပ်ကြည့်တာလေ။ တကယ်မှန်တယ်၊ အဝေးက အနံ့တွေကို ငါ ကောင်းကောင်း ရနေတယ်။ မျက်လုံး မစည်းခင်က ဒီ အနံ့တွေကို မရခဲ့ဘူး။
အမ ။ ။ အခု နင်က ဘာအနံ့တွေ ရနေလို့လဲ။
မောင် ။ ။ မီးဖိုထဲမှာ မေမေချက်နေတဲ့ ဟင်းနံ့တွေ၊ ကြက်သွန်နံ့၊ သစ်သီးနံ့၊ ဘာအနံ့လို့ ခွဲခြားပြောလို့ မရတဲ့ အနံ့မျိုးစုံကို ငါ ရနေတယ်။
အမ ။ ။ မှန်း စမ်း...၊ ရမှာပေါ့၊ နင့်မျက်လုံးကို စည်းထားတဲ့အဝတ်က ငါ လျှော်မလို့ထားတာ မလျှော်ဖြစ်သေးတဲ့ လက်သုပ်ပုဝါကြီး ဟဲ့။
တန်ရာ တန်ကြေး (အထူးကုဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ မိဘမေတ္တာဖွဲ့ အက်ဆေး)
in ဇင်ဝေသော် - on 3/21/2013 - No comments
Grief hurts but heals too
By Dr. James Low
" ချစ်ခြင်းတရားရဲ့လျော်ကြေးက လမ်းခွဲ ၀မ်းနည်း ပူဆွေးရခြင်းဆိုရင်တောင် အရဲစွန့်ပြီးချစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ချစ်ရမယ့်သူလည်းမရှိ ၀မ်းနည်းစရာ လည်း မလိုတဲ့ အနေအထားထက်အများကြီးသာပါတယ်"
ဒီနှစ်ထဲမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ၊ နေ့လား ညလား မသိရတဲ့ လူနာတွေကို အမြဲတမ်းကုသမှုပေးနေရတော့ ဘ၀နဲ့ဆိုင်တဲ့ အမြင်တွေလည်းတော်တော် ရမိတယ်။ နေ့လား ညလား မသိရ ၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သေခြင်းတရားဆီ ချဉ်း ကပ်နေတဲ့ မိမိတို့ ကျေးဇူးရှင်မိခင် (သို့) ဖခင် တို့ကို ထိုင်ရင်း ကြည့်နေကြ ရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုလည်း နားလည်စ ပြုလာတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်တွေ ဒီလောက်ကြုံတွေ့နေရတာတောင် ကျနော့်ကိုယ်ပိုင်ဖခင်ကြီး ဆုံးပါးခဲ့ရင် ဘယ်လိုလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပြင်ဆင်မှု လုပ်မထားနိုင်ခဲ့ဘူး။
၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေဟာ တစ်ခုခုဆုံးရှုံးရာကနေ အစပြုတယ်ဆိုတာသာ မှန်ခဲ့ရင် ကျနော့်ဝမ်းနည်းမှုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့စရာပါ။ အဲဒီကတည်းက ဟောလီဒေးရက်တိုခရီးထွက်ရင်း ကျနော့်ဖခင်ကြီး ဟာ လေဖြတ်တဲ့ ရောဂါခံစားလိုက်ရပြီး စကားမပြောနိုင် ၊ လမ်းမလျှောက်နို င် ၊ စားလည်းမစားနိုင်ရှာတော့ဘူး ။ အတိုဆုံးစကားနဲ့ပြောရရင် ကျနော့်ဖ ခင်ကြီးဟာ လူရာမ၀င်တော့ပါဘူး ။
အစာကိုပိုက်ကနေတစ်ဆင့် သွင်းယူရတယ်၊ ဆီးကိုလည်း ပိုက်ကနေတဆင့် သွားရတယ်။ သူ့ရဲ့နေ့စဉ်သာမန်လုပ်ငန်းလေးတွေဟာ သူတစ်ပါးအကူ အညီမပါဘဲ ဘာဆိုဘာမှ လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဘယ်တော့မှ ပြန်ကောင်း လာတော့ မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပြီး ဖခင်ကြီးရဲ့ ဘ၀အစိတ်အပိုင်း ကြီးတချို့ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတာလည်း ခံစားလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ သူ့စ ကားပြောသံကို ဘယ်တော့မှ ကြားရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ၊ သူနဲ့ထမင်းလက် ဆုံစားခွင့် ဘယ်တော့မှ ပြန်ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ အတိအကျ သိ ထားပေမယ့် ပြန်ရလေနိုးဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်က ကုန်မသွားခဲ့ပါဘူး ။
အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဟာ တစ်နေ့နေ့မှာ မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့လာ ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့အတူ ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆိုပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြို တင်ပြင်ဆင်မှုလည်း ကြိုးစားတော့ ထားခဲ့မိပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကြေကွဲဝမ်း နည်းမှုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း သိလာသလိုလို ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆို ဒီလိုကြေ ကွဲဝမ်းနည်းမှုဟာ တစ်ယောက်ယောက်ကို အချစ်ကြီးချစ်မိလို့ ဖြစ်လာရတာ လား ။
ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မကြောင့်မကျ နေနိုင်တဲ့ ဒီဘ၀ကိုရောက်ေ အာင် ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးခဲ့သူတွေဟာ ကျနော့်မိဘနှစ်ပါး မဟုတ်လား ။ သူတို့ကိုတော့ ကျနော်ချစ်သင့်တာပေါ့။ သူတို့ကို ချစ်မိလို့ ဒီလိုကြေကွဲ ပူဆွေး ရတယ်ဆိုရင်လည်း ထိုက်တန်တယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ သူတို့ကျနော့် ကိုပေးခဲ့တဲ့ မိဘတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ၊ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀ တည်းက ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ရတာတွေဟာ မနည်းလှပါဘူး ။
ဒါနဲ့တိုတိုပဲ ကောက်ချက်ချလိုက်မိတယ်။ ချစ်ခြင်းတရားရဲ့လျော်ကြေးက လမ်းခွဲ ၀မ်းနည်း ပူဆွေးရခြင်းဆိုရင်တောင် အရဲစွန့်ပြီးချစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ချစ်ရမယ့်သူလည်းမရှိ ၀မ်းနည်းစရာလည်း မလိုတဲ့ အနေအထား ထက် အများကြီးသာပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်လေးကတင်ပဲ လေဖြတ်တာ အပြင် တော်တော်ဆိုး ရွားတဲ့ ကင်ဆာပါထပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ် ။ ရောဂါသိခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် သုံး ပတ်အတွင်းမှာပဲ သေခြင်းတရားဟာ ကျနော့်ဖခင်ကြီးဆီ မြန်မြန် ဆန်ဆန် ပဲ ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ် ။ ဒီအတွက် ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် ပြင်ဆင် ခဲ့ပြီးပြီလို့ ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် တကယ်တော့ အဆင်သင့်ဖြစ်မနေခဲ့ပါဘူး ။
အသက်မရှိ ၊ အေးစက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဖခင်ကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လက နောက်ဆုံးကျနော် ကိုင်တွယ်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ အခေါင်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ရုပ်အလောင်းဟာ ငါ့ဖခင်မဟုတ်တော့ဘူး ၊ အနှစ်မရှိတဲ့ အနတ္တ ရုပ် ကြွင်းတစ်ခုသာပဲလို့ ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် ထပ်တလဲလဲသတိပေးနေခဲ့တယ် ။ မရပါဘူး ။
၀မ်းနည်းမှု ၊ ဒေါသဖြစ်မှု ၊ မယုံကြည်နိုင်မှု ၊ ကြောက်ရွံ့မှု ၊ နောင်တ စတာတွေဟာ စိတ်ထဲမှာ အထိန်းအကွပ်မဲ့လျက်ပါ။
ဒီခံစားမှုတွေအားလုံးထဲမှာ တစ်ခုက “ ငါ အဖေ့အတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ကော ပေးနိုင်ခဲ့ရဲ့လား ၊ ဒီလောက်ကြီးမြန်မယ်မှန်း သိရင် သူ့အတွက် ဒီထက် အချိန်ပိုမပေးသင့်ခဲ့ဘူးလား ” ဆိုတဲ့ နောင်တ အတွေးပါပဲ။
ဈာပနအခမ်းအနားနဲ့ ဘာသာရေးကျင့်ဝတ်ထုံးစံတွေက ကျနော့်ကို သက် သာမှုရစေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်း ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေရချိန်မှာ ဒါတွေဟာ အရေးပါလှသလို အရှိတရားကို လက်ခံတတ်ဖို့အတွက်လည်း ဒါတွေ လို အပ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သေခြင်းတရားဟာ မြဲတဲ့တရား ဆိုတာ အစပြုလက်ခံလာနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ် ။ ဒီသဘောတရားကို လက်ခံ လိုက်ခြင်းဟာ ကျနော့်စိတ်ကို ကုစားဖို့ လမ်းစလည်း ဖြစ်နေပါတယ် ။
ဈာပနအခမ်းအနားအနားမှာ အဖေ့မိတ်ဆွေ အသစ်အဟောင်းတွေရော ၊ ကျနော့်မိတ်ဆွေ အသစ်အဟောင်းတွေပါတက်ရောက်လာကြတော့ စည် စည် ကားကားပါပဲ ၊ ဒါကသည်ပင် ဖေဖေဟာ လူချစ်လူခင်ဘယ်လောက်များ တယ်ဆိုတာ ပြသရာရောက်သလို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အားပေးမှုကြောင့် မိသား စုဟာ အထီးကျန် မဆန်လှဘူးဆိုတာ သိခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
အံ့ဩစရာပါပဲ ၊ ဒီရက်တွေအတွင်း ကျနော့်စိတ်ထဲခံစားနေရတာတွေ မမျှော် လင့်ဘဲ လျော့ပါးသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖေ နေခဲ့တဲ့ အခန်း ၊ အဖေထိုင်တတ်တဲ့ ထိုင်ခုံ ၊ အဖေပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ပြန်ကြားမိ တိုင်းတော့ မျက်ရည်စို့လျက်ပါပဲ ။ သေဆုံးသူတွေကို သတိရနေခြင်းဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ အချိန်ကို နောက်ပြန်ဆွဲနေခြင်းပဲလို့လို့လည်း တချို့ကပြောကြပါ တယ်။ အဖေ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပစ္စည်း ပစ္စယတွေကို ရှင်းလင်းပေးရတာက လည်း တော်တော်နာကျင်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါက မလုပ်လို့လည်း မရပါ ဘူး ။ တကယ်လက်တွေ့ဘ၀မှာက အဖေမပါတော့တဲ့ ကျနော်တို့မိသားစု ခရီးကို ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ခရီးဆက်ကြရတော့မှာမဟုတ်လား ။
အဖေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးဟာ ပန်းအိုးကွဲ တစ်ခုလိုပါဘဲ ။ ကွဲနေတဲ့ ပန်းအိုးကို ပြန်ဆက်ကြရာမှာ ပုံမှန်အရင်လိုတော့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလဲ ။ ဒါပေမယ့် အရင်လိုမဟုတ်တဲ့ ပန်းအိုးကွဲ အစအနတွေကိုပဲ အမြတ် တနိုး နဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း အဖေဟာ ၈၈-နှစ် အရွယ် အ ထိ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အသက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာရှိကြတဲ့ သက် ကြီးရွယ်အိုတွေအားလုံးလိုပါပဲ ကျနော့်အဖေဟာ မိဘမဲ့ ကလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ နေထိုင်ခဲ့ရတယ်။ သူ့မှာတီဘီရောဂါ ရခဲ့ တယ် ။
ဘ၀နဲ့ပတ်သက်လို့ကျနော်တို့တွေးယူသင့်တာက ဘာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီလဲ ဆိုတာထက် ဘာတွေရလိုက်သလဲ ဆိုတာမျိုးပါ။ ကျနော်ပြန်ရလိုက်တာ ကတော့ အဖေဆုံးပါးသွားတဲ့နောက် ငါတို့လည်း ဒီလမ်းကိုလိုက်ရမှာပဲ ဆို တဲ့ အသိနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထပ်တလဲလဲ သတိပေးနေမိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ရဲ့လက်ရှိဘ၀နဲ့ စိတ်ဓါတ်ရင့်ကျက်မှုကျင့်စဉ်တွေကို အမှတ်ရစေတယ်။
ဖခင်ကြီးရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို မီးသင်္ဂြိုလ်တော့ အရိုးတွေ ၊ ပြာစတွေ ၊ အမှုန် အမွှားတွေပဲ ကျန်ခဲ့တော့တယ် ။
ဒါတွေသည်ပင် ဘ၀တစ်ခုလုံးရဲ့ ရုပ်ကြွင်း လား ၊
သေဆုံးသူရဲ့ ရပိုင်ခွင့်က ဒါပဲလား ?
မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျနော်တို့ရနိုင်တာက လူ့ဘ၀နဲ့ဆိုင်တဲ့လေးနက်တဲ့ အသိ ပါ။ ဒီအသိကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျနော်တို့ပိုပြီးချစ်မြတ်နိုးလာနိုင်တယ် ။ ဒိထက်ပိုပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင် ဘ၀ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကိုတောင် လေ့လာသုံးသပ်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။
ဒီကြေကွဲ ၀မ်းနည်းရမှုကို အခြေခံပြီး ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ်တွေတောင်ရလာနိုင်ပါတယ် ။
တချို့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေဟာ နက်နက်နဲနဲကြီး ခံစား လိုက် ရပြီးတဲ့နောက်မှ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ သဘောလည်းရှိပါတယ်။
ဒီအတွေးတွေကြောင့် ပူပြင်းလှတဲ့စိတ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းစပြုလာတယ်။ အချိန်က ကုစားပေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ရှည်မှု ၊ ယုံကြည်မှု ၊ မျှော်လင့်ချက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေရဲ့ အကူအညီတော့ လိုတာပေါ့ ။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော့်ဖခင်ကြီးရဲ့ ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကို အောက်မေ့လိုက် မိတိုင်း ၀မ်းနည်းမိရတာတွေ ၊ မျက်ရည်ကျရတာတွေဟာ ကျနော်နဲ့ ဝေး လာခဲ့တယ်။
ရုပ်ဝတ္ထုအားဖြင့် အဖေဟာမရှိတော့ဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် နှလုံးသား တစ်နေရာမှာတော့ အဖေဟာကွယ်ပျောက်သွားမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ။ ဒါဟာ စိတ်ခံစားမှုပါ ။ ဒီခံစားမှုမှာ အချိန်နဲ့နေရာဆိုတာ မရှိပါဘူး။ မှန်ချင်မှတော့ မှန်မှာပေါ့ဗျာ၊ ကျနော့်ရဲ့ ၀မ်းနည်းမျက်ရည်တွေဟာ ကျနော်နဲ့ ကျနော့်အဖေ တို့ဆက်ဆံရေးအတွက် အဆုံးသတ်မရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းတရားကို ဖွဲ့ချည်ပေးခဲ့ တယ် လို့ ခံစားနေရပါတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 3/20/2013 - No comments
ကျနော်မရှိချိန်မှာများ တယ်လီဖုန်းလာခဲ့ရင် မလွဲအောင်လို့ဆိုပြီး အော်တို မက်တစ် ဖုန်းဖြေတဲ့စက်ကလေး တပ်ဆင်ထားလိုက်မိတယ်။ ဒီတော့မှ နည်း ပညာက ဘယ်လောက် ရှေ့ရောက်နေတယ်ဆိုတာ သိရတော့တယ်။ ဟိုဖက် က ခေါ်တာကလည်း စက်ပဲ ဖြစ်နေတယ်လေ။
ဒါနဲ့ စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာကြည့်တော့ ကျနော့်ဆီခေါ်ရင် ကျနော့်စက်က အလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေ တန်းပြောပြပြီး မက်ဆေ့ ချန်ထားခဲ့ ဖို့ပြောတယ်။ ဟိုဖက်ကက်ကလည်း အဲသလိုပဲ မက်ဆေ့ချန်ထားခဲ့ဖို့ပြောပြီး တစ်စက်နဲ့ တစ်စက် ဆစ်ဂနယ်တွေပေးပြီး ခဏစောင့်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘာမက်ဆေ့မှ ချန်မထားကြဘူး။
ခဏနေတော့ ဟိုဖက် ဖုန်းက ကျနော် မဖြေတာထင်ပြီး ထပ်ထပ် ခေါ်တယ်။ ကျနော်တော့ အသလိုပဲထင်တယ်။ ကျနော့်စက်ကလည်း ဖုန်းဝင်လာတိုင်း ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ဆံတယ်။ မက်ဆေ့ ချန်ထားခဲ့ဖို့ပဲ ပြောတယ်။ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းလှဘူး။
ဒါမှမဟုတ် အော်တိုမက်တစ်စက်ချင်းများ တစ်စက်ကိုတစ်စက် သာယာနေ ကြသလားမသိဘူး။ ဒီလိုလေ ကျနော့်ဖုန်းထဲက အသံက အမျိုးသားအသံ၊ ဟိုဖက်က အမျိုးသမီးအသံ။ ဒီခေတ် နည်းပညာက ပြောလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး ။ လူနဲ့ တော်တော်တူနေပြီ။
( Bruce Peasley )
လူစိမ်းမှ လူရင်းသို့ ( ၇း၎ )
- on 3/19/2013 - No comments
" တကယ်လို့ သစ္စာရှိမှု၊ မိသားစုအနှောင်အဖွဲ့၊ စစ်မှုထမ်းစဉ်က ရဲဘော် ရဲ ဘက်စိတ်၊ ကျောင်းတက်စဉ်က သူငယ်ချင်းစိတ် … တွေရောလို့ မေးရင် … မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ အခွင့်အရေးမရှိရင်တော့ အရည်အချင်း ရှိတဲ့ကောင်က ပြန်မလာပါဘူး" (လီကွမ်းယု)
မေး ။ ။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ က နိုင်ငံရပ်ခြားကို အပြီးထွက်သွားပြီး နေထိုင်ခြင်းပဲ။ ဒီပြဿနာက မစ္စတာ လီ ၀န်ကြီးချုပ်ဘ၀ကတည်းက ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာ။ အခုလည်း ရင်ဆိုင်နေကြရ တုန်းပဲ။ အခု ပိုပြီး ဂလိုဘယ်လိုက်ဇ်ဖြစ်လာတဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဒီပြဿနာကို ဘယ် လို အဖြေရှာနိုင်မလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါက ဂလိုဘယ်ဖြစ်နေတော့ ဒီရေစီးကို ငါတို့လည်း ရပ်တန့်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ငါတို့ကျောင်းသားလေးတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ထွက်သွားတဲ့အခါ ဒီ မှာအမြစ်တွယ်ရစ်အောင် တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။ နိုင်ငံခြားမှာ သူတို့ရနိုင်တဲ့ အ လုပ်အကိုင်နဲ့ အခွင့်အရေးပဲ။ ဒါဆို သူတို့ပြန်လာကြမှာ။ ဘယ်အရာက သူ တို့ပြန်လာမှာကို တားမြစ်မလဲ။ အိမ်ဈေးလား၊ ကားဈေးလား။ အမေရိကမှာ အိမ်ဈေး၊ ကားဈေးက ချိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဟန့်အတားက ရှိနေတယ်။ သူတို့ လူဖြူအုပ်စုတွေထဲ ဘယ်တော့မှ မရောက်သလို ဘယ်တော့မှလည်း အသိ အမှတ်ပြုခံရမှာ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒါ လူဖြူတွေရဲ့နိုင်ငံပဲ။ သမ္မတ အိုဘားမားကတော့ ဒါကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ တယ်ပေါ့။ သူ့ကိုတော့ အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ချွင်းချက် ထားရလိမ့်မယ်။ အများအားဖြင့်တော့ လူဖြူနဲ့လူမည်း ရောလို့မရကြပါဘူး။
တို့ဆီက တော်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင် ဘွဲ့မရခင် အမေရိကမှာ အလုပ် ကမ်းလှမ်းတာကို ခံကြရတယ်။ တို့ကျောင်းသားတွေက
“အိုကေ … စင်္ကာပူမပြန်ခင် အတွေ့အကြုံလေးဘာလေး ယူလိုက်ဦးမယ်" လို့ ဆိုကြတယ်။
တကယ်လို့ ငါတို့ဆီမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ စီးပွားရေးအနေအထားမရှိရင် သူ တို့ပြန်လာကြပါ့မလား။ ငါတော့ မထင်ဘူး။ ငါတို့စီးပွားက ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ကုမ္ပဏီက သူ့ကို ငါတို့ဆီ ထ ရန်စဖာ ချပေးလိုက်မှာပေါ့။ သူ့ကွန်ယက်က ဒီမှာ ပိုကောင်းတယ် မဟုတ် လား။
နောက်ဆုံး သူတို့ ပြန်လာ၊ မလာက ဘယ်အပေါ်မှာ မူတည်နေသေးတုန်း။ အားကောင်းတဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးပါပဲ။
တကယ်လို့ သစ္စာရှိမှု၊ မိသားစုအနှောင်အဖွဲ့၊ စစ်မှုထမ်းစဉ်က ရဲဘော်ရဲဘက် စိတ်၊ ကျောင်းတက်စဉ်က သူငယ်ချင်းစိတ် … တွေရောလို့ မေးရင် … မှန်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ အခွင့်အရေးမရှိရင်တော့ အရည်အချင်းရှိ တဲ့ကောင်က ပြန်မလာပါဘူး။
မေး ။ ။ အခုမှ အခြေချ နေထိုင်လာတဲ့လူတွေကြောင့် စင်္ကာပူမှာ ရှိပြီးသား လူမျိုးစုများ စုပေါင်းနေထိုင်ရေးမူဝါဒကို အဟန့်အဟား မဖြစ်စေနိုင်ဘူးလား။ ဥပမာ … အိန္ဒိယန်းတွေက သူတို့ ဟိုမှာ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ခွဲခြားမှုစနစ်တွေ ဒီကို ယူလာတာမျိုး၊ တရုတ်တွေမှာလည်း အသားပိုညိုတဲ့ တရုတ်တွေကို ဖြူ တဲ့တရုတ်တွေက အထင်သေး၊ မနှစ်မြို့တာမျိုးတွေ။
ဖြေ ။ ။ မထင်မိပါဘူး။ ဒီကိုရောက်လာတဲ့ လူသစ်တိုင်း သူတို့က လူနည်းစု ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယန်းတွေ ဟိန္ဒီစကားကောင်းနေလို့ စင်္ကာပူမှာ ဘာမှလုပ်လို့ မရဘူး။ အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းမှ ရမယ်။
အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ သူတို့ဟိန္ဒီ ဘာသာကို တော့ သင်ချင်သင်နိုင် တာပေါ့။ အိန္ဒိယပြန်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း လုပ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယ မှာ အင်္ဂလိပ်လို ပြောလို့ရေးလို့လည်း ရနေတာပဲ။ သူတို့ သဘောပေါက်ထား ရမှာက သူတို့ကလေးတွေ ဒီက ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နေရမယ် ဆိုတာပဲ။ နို့မို့တော့ သူတို့ ဘယ်မှရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဇာတ်စနစ်ကတော့ ပျောက်ဖို့ အချိန် အတော်ကြာပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဝင်လာတဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း ဒီဇာတ်စနစ်အစွဲက ပါလာတယ်။ ဒီမှာ ကျောင်း တက်တဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက်တွေလည်း သူတို့ လက်ထပ်တဲ့အခါမှာ မိဘတွေဆီ က ဖိအားတော့ ခံနေကြရဦးမှာပဲ။ “မင်းအတွက် ဇနီးကို အိန္ဒိယပြန် ရှာပေးမ ယ်” ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းတော့ ဒီယဉ်ကျေးမှုက ပျောက်သွားမှာပါ။ ဒီယဉ်ကျေးမှုက စင်္ကာပူနဲ့မှ အံမဝင်တာပဲ။ ကလေးတွေက ကျောင်းတက်ရင်း ဒီမှာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြ၊ ဒါဆို သူတို့ ငြင်းမှာပဲ။ ဒီမှာ အိန္ဒိယန်းဒေါက်တာတွေ နဲ့ တရုတ်ဒေါက်တာတွေ လက်ထပ်ထားတာ အများကြီးရှိတယ်။
တရုတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဒီလောက် ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သူတို့မှာ ဇာတ်စနစ်မရှိဘူး။ တရုတ်စကားကို လေယူလေသိမ်းတစ်မျိုးနဲ့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါတို့ စာသင်ကျောင်း တွေရဲ့ ကောင်းမူကြောင့် သူတို့ကလေးတွေကတော့ စင်္ကာပူရီးယန်းတွေ ပြောသလိုပဲ ပြောလာကြမှာပါ။ တကယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ မူရင်းတရုတ်လေသံကြောင့် ငါတို့ တရုတ်စကားတောင် ပိုကောင်းလာနိုင် တယ်လို့ မျှော်လင့်မိတယ်။
မေး ။ ။ လူထုရဲ့ သဟဇာတဖြစ်မှုကို နောက်ထက် ခြိမ်းခြောက်လာ တဲ့ ပြဿ နာက အသစ်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားသူဋ္ဌေးတွေက လက် ဝတ် ရတနာတွေ ဝတ်ဆင်ပြီး သူတို့ ဘယ်လောက် ချမ်းသာကြောင်း ပြတတ် တဲ့ သဘာဝပဲ။ ဒီယဉ်ကျေးမှုကလည်း စင်္ကာပူးရီးယန်းတွေနဲ့ သိပ်ပြီး အစပ် အဟပ် မတည့်လှဘူး။
ဖြေ ။ ။ လက်ဝတ်ရတနာတွေ ဝတ်တာက အများအားဖြင့် အိန္ဒိယန်း အမျိုး သမီးတွေပါ။ သူ့ရှိလို့ သူဝတ်တာပဲ။ အဲဒါ သူ့ကိစ္စလေ။ တို့လူမျိုးတွေက ဒါကို မနာလို ဖြစ်နေကြလို့လား။ ရတနာတွေ ညွှတ်နေအောင် ဝတ်ပြထားတာတွေ Tatler မဂ္ဂဇင်းထဲမှာလည်း တွေ့နေရတာမဟုတ်၊ မဟုတ်ဘူးလား။ အဲသလို လူကုံထံဝါဒကို ငါ အားမပေးပေမဲ့ ရှိပါစေဆိုပြီး ထားလိုက်တာပဲ။ လူ့အဖွဲ့ အ စည်းတိုင်းရဲ့ အထက်တန်းလွှာမှာ ဒါမျိုးတွေ ရှိတတ်တယ်။ ဖက်ရှင်ကိုသူများ ထက်ဦးအောင် ဝတ်တာတို့၊ ပါတီပွဲတွေ တက်တာတို့ပေါ့ကွာ။ နေကြစမ်း ပါစေ။ လူနည်းစုကလေးပါ။ သူတို့ကြောင့် စင်္ကာပူရဲ့ “စံ” မပြောင်းပါဘူး။ စင်္ကာပူရဲ့ “စံ” ကို သက်မှတ်တာက ဝန်ကြီးတွေ၊ ပါလီမန်အမတ်တွေနဲ့ စီအီး အိုတွေပါ။
ကမ်းခြေအိမ်တွေ၊ F1 ပြိုင်ပွဲတွေ ရှိနေတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်း ဝင်လာကြ မှာပဲ။ သူတို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့လည်း တို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ Ong Beng Seng ဆိုရင် အဲသလိုလူမျိုးတွေ ဖော်မြူလာဝမ်း ကားပြိုင်ပွဲမှာ ပိုများလာေ အာင် ကြိုးစားနေတယ်။
ကာစီနိုတွေ ရှိနေပြီဆိုတော့ အခမ်းအနားတွေ၊ ပြပွဲကြီးတွေ ရှိနေမှာပဲ။ ဒီတော့ တရုတ်၊ ကုလားသူဋ္ဌေးတွေလည်း ရောက်လာကြမှာပဲ။
ပိုပြီး ချမ်းသာတဲ့လူတွေ ဒီကို ရောက်လာတာ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ဒါမျိုးတွေ တီဗွီမှာ ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ အခု အပြင်မှာ ဒါမျိုးတွေ တကယ် တွေ့မြင်နေရ တယ်။ ဒီတော့ မင်း ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ ပို ပိုပြီး ကြိုးစားပေါ့။ လက်ဝတ် ရတနာက ပိုက်ဆံရှိရင် မင်းလည်း ဝယ်လို့ရတာပဲ။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ချမ်းသာတာကို ထုတ်ပြဖို့ စင်္ကာပူရီးယန်းတွေက ရတနာတွေ ညွှတ်နေအောင် ဝတ်ကြမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါမျိုးကို သူတို့ ခံတွင်း မတွေ့ကြ လှဘူး။
မေး ။ ။ စင်္ကာပူဟာ “နေးရှင်း” တစ်ခုဖြစ်ဖို့ ကူးပြောင်းဆဲကာလလို့ ပြော ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းသက်က တိုတိုနဲ့ ဘုံဆိုင်ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ဘူမိဗေဒသဘောတရားတွေက ဘယ်က ရလာမှာလဲ။
ဖြေ ။ ။ အဖြေက ဇာတိမာန် ဖြစ်နေရမယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက် အသက် ပင်သေသေဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အသက်ပေး ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေပဲ။ တရုတ်ပြည်ကိုပဲ ကြည့်။ သူတို့ လည်း ပြည်ပကျူးကျော်တာတွေ ခံခဲ့ရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျူးကျော်သူတွေ အား နည်းလာတာနဲ့ တပြိုက်နက် ပြန်လည်တော်လှန်နိုင်ခဲ့တာချည်းပဲ။ အဲဒါ တညီ တညွှတ်တည်းရှိလို့။ ဘာသာစကားတူတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုတူတယ်။ လူမျိုး အနေနဲ့ကလည်း ဟန်လူမျိုးဆိုတာ တူကြတယ်။
တို့က ဘာသာစကား တူသလား၊ ယဉ်ကျေးမှု တူသလား၊ မတူဘူး။အနောက် ပိုင်း အိန္ဒိယလို (သို့) အာဖရိကနိုင်ငံတွေလို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို တို့က ကောက်ယူမွေးစားခဲ့ကြတယ်။ အာဖရိကန်နိုင်ငံတွေလည်း “နေးရှင်း” မဟုတ်ဘူး။
တကယ်လို့သာ ဒုတိယဘာသာစကား ပျောက်သွားရင် (တရုတ်၊ မလေး၊ အိန္ဒိယန်းစကား … တစ်ခုခုကို ဆိုလိုပါတယ်) စင်္ကာပူတင်မကဘူး၊ ငါတို့ရဲ့ဇာတိစိတ်လည်း ပျောက်ထွက်သွားမှာပဲ။ “နေးရှင်း” တစ်ခုဟာ (၄၅) နှစ်နဲ့ တည်ဆောက်ယူလို့ မရပါဘူး။
မေး ။ ။ နိုင်ငံခြားသားတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်လာတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုး စား တည်ဆောက်နေတဲ့ လူမျိုးရေးစိတ်ဓာတ် ပျောက်ဆုံးသွားမှာ မစိုးရိမ်မိ ဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ စိုးရိမ်စရာ ရှိကောင်း ရှိမှာပေါ့။ ဒါဖြင့် တို့မှာ တခြားရွေးစရာကော ရှိလို့လား။ စင်္ကာပူးရီးယန်းတွေကို ကလေးနှစ်ယောက် အနည်းဆုံး ယူကြပါ ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် သုံးယောက်ယူကြပါလို့ ငါ အမြဲတမ်း ပြောတယ်။ ဘယ်သူမှ အရေး မစိုက်ဘူး။ ကဲ … မင်း ဘာလုပ်မလဲ။
မေး ။ ။ စင်္ကာပူးရီးယန်းတွေက “စင်္ကာပူစိတ်” ရှိကြသလား။
ဖြေ ။ ။ ဩစတေးလျက Perth မြို့ကို ရောက်တော့ အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ စင်္ကာပူး ရီးယန်းတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။ သူတို့က အဲ့ဒီမှာ အခြေကျနေကြပေမဲ့ စင်္ကာပူ ကို ကောင်းကောင်းကြီး သတိရကြတယ်။ ငါတို့ တွေ့ဆုံပွဲကို ဦးဆောင်စည်း ရုံးတဲ့လူဆိုရင် သူ့သားရဲ့ စင်္ကာပူပတ်(စ်)ပို့ဒ်ကို အာမခံပစ္စည်းတစ်ခုလိုကို သိမ်းထားတာ။ သူ့သားက ပါ့(သ်)တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ရပြီး ဩစတေးလျမှာ ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီအကြီးအကြီးတစ်ခုမှာ စာရင်းစစ် လုပ်နေတယ်။
“ဘာဖြစ်လို့ စင်္ကာပူပက်စ်ပို့ဒ်ကို ဆက်ကိုင်ထားတာလဲ” လို့ မေးတယ်။
"စင်္ကာပူပြန်ပြီး စစ်မှုလည်း ထမ်းခဲ့ပြီးပြီ။ သူ့သဘောက ဩစတေးလျ ရဲ့ စီး ပွားရေးများ ကျဆင်းသွားမယ်ဆိုရင် စင်္ကာပူ ပြန်ချင်ရင် ပြန် လို့ရအောင် ” လို့ သူက ပြောတယ်။
သူက ဒီကို ပြန်လာပြီး စစ်မှုထမ်းတယ်။ သူ့မိသားစုတွေကတော့ ဟိုမှာ။ တကယ်လို့ သူက ဩစတေးလျန်း မိန်းကလေးကို လက်ထပ်လိုက်မယ်၊ အဲဒီ မှာလည်း အလုပ်အကိုင်က ရှာဖွေလို့ မရဘူးဆိုရင် သူ့ဇနီးကို ဒီကို ခေါ် လာပြီး နေကြမှာ။
ဥပမာ … ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲကြောင့် Perth က ခြောက်သွေ့သွားမယ် ဆိုရင် ဒီကို ပြန်လာကြမှာ။ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ နေကြရတာ ဆိုတော့ ပုံသေမူဝါဒကြီး ဆွဲထားလို့ မရတော့ဘူးပေါ့။
လောကကြီးမှာ လူ နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 3/19/2013 - No comments
" ကျနော့် အဖိုးအလိုအရ လောကကြီးမှာ လူ နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်၊ တစ်မျိုးက သူနဲ့ သဘောထားခြင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ လူ နောက် တစ်မျိုးက သူနဲ့ သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့ လူ " ( အမည်မသိ )
" လောကကြီးမှာ လူ နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်၊ တစ်မျိုးက လူကောင်း၊ နောက် တစ်မျိုးက လူဆိုး။ လူကောင်းက ကောင်းကောင်း အိပ်ရပြီး လူဆိုးက လမ်းပေါ်မှာ လူကောင်းထက် ပို ပျော်ရတယ် " (Woody Allen).
" လောကကြီးမှာ လူ နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်၊ တစ်မျိုးက လောကကြီးမှာ လူ နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ် ဆိုတာကို ယုံကြည်သူနဲ့ နောက် တစ်မျိုးက ဒါကို မယုံကြည်သူ " (Robert Benchley ).
" လောကကြီးမှာ လူ နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်။ ခု တစ်မျိုးနဲ့ တော်ကြာ တစ်မျိုး " ( မြန်မာကာတွန်းတစ်ကွက်၊ ဆောရီး၊ ဆရာ့နာမည် မမှတ်မိ )
in ပြုံးစိစိ, သီဟနာဒ - on 3/18/2013 - No comments
သူ့နာမည်ကတော့ ဦးကျော်သိန်းပါ။ ပိုပြီး တိတိကျကျ ပြောရ ရင် ရွှေပန်း တိမ် ဦးကျော်သိန်း။ ဟိုခေတ်က ရွာမှာ ရွှေပန်းတိမ်ဆိုတာရှားရှား ပါးပါး ဆိုတော့ ဦးကျော်သိန်းက နာမည်ကြီးထဲမှာလည်း ပါတာပေါ့။
ပိုက်ဆံရှိပေမဲ့ သူက ဘာသာရေး အလုပ်တွေနဲ့ သိပ်ပြီး ထဲထဲဝင်ရှိလှတာ မဟုတ်ဘူ။ အဲ သူ့မှာ ကျန်နေတဲ့မိဘဝတ္တရားက သူ့သားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ခင်မော်ဝင်း၊ ငလင်းနဲ့ ငသင်းကို ရှင်ပြုပေးဖို့ပဲ။
သူ့သားတွေကို ရှင်ပြုအလှူပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကလည်း နယ်မှာေ တာ့ သတင်းကြီး တစ်ပုဒ်ပဲလေ။ သူ့အလှူကို လာပြီးအားပေး (စား) ဖို့ အားခဲနေကြတဲ့ ရွာနီးချုပ်စပ်က ပရိသတ်ကလည်း နည်းတာ မဟုတ်ဘူး။
နယ်မှာ အလှူပေးရတယ်ဆိုတာကလည်း လွယ်လှတာမဟုတ်ဘူး။ ထင်းက အစ လချီပြီး ကြိုတင်ခုတ်ထားကြရတာ။ ဦးကျော်သိန်းအိမ်က ထင်းခုတ်ဖို့ လုပ်အားပေးတွေခေါ်တယ် ဆိုတော့မှ တကယ် အလှူဖြစ်တော့မှာလို့ ရွာထဲ ကလည်း ယုံကြည်ကြတော့တာ။
တစ်သက်တစ်ခါ အလှူမို့ စိတ်ပြတ်တဲ့ ဦးကျော်သိန်းက ငွေဘယ်လောက် ကုန်ကုန် အားလုံးစိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပါ။ လူတွေ ကျွေးဖို့မွေး ဖို့ဆိုရင် ဆန်ကအစ အကောင်းစားတွေချည်းပဲ ဝယ်တာ။ ငါးခြောက်ဆို လည်း ရှယ်ပဲ။ ဝက်သားကိုတော့ ရွာမှာပဲ ဟင်းပေါ်ကြမှာမို့ မသင့်ဘူးလို့ ဆရာတော်က အမိန့်ရှိလို့ လက်လျှော့လိုက်တယ်၊ ငါးခြောက်ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်အလှူမရှိလည်း ငါးတွေက သေပြီးသားတွေဆိုတော့ ပံ့သကူသားတွေပဲ မဟုတ်လား။ ထားလိုက်ပါတော့၊ ပြောချင်ရာ မရောက်ဘဲ ရှိနေမယ်။
နောက်ဆုံး အလှူမှာ ဘုန်းကြီးပင့်ဖို့ ဦးကျော်သိန်းက ဆရာတော်ဆီသွားပြီး ဩဝါဒ ခံတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ စဉ်းစားထားတာကတော့ ဆရာတော် လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ပင့်သံဃာ ဘယ်လောက်များများ ပင့်မှာပဲ။ ပြော မယ်သာ ပြောတာ ရွာရှိသံဃာ သာမဏေတွေပါ ပင့်မယ်ဆိုရင် ရွာမှာတင်ပဲ နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတုန်းက တောရကျောင်းမှာတင်ပဲ ရဟန်း ရှစ်ပါး၊ သာမဏေ ၃၂ ပါး ရှိတယ်။ အလယ်ကျောင်းမှာ အဲသလောက် မများပေမဲ့ စုစုပေါင်း ၃၀ အောက်တော့ မရှိနိုင်ဘူး။ အလှူပိန်လေးတွေကတော သင်္ကန်း ကြီးဝတ်လောက်ပဲ ( ရဟန်းတွေကိုပဲ ) ပင့်တတ်ပြီး အလှူကြီးတွေကတော့ သာမဏေတွေပါပင့်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဦးကျော်သိန်းစိတ်ထဲမှာ ရှိတာက ရွာရှိ သံဃာကုန်ပေါ့။ အလှူကကြီး ဘုန်းကြီးပင့်ရာမှ သူများထက် ငယ်နေလို့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။
ဆရာတော်ဆီရောက်လို့ ဆရာတော်ကိုလည်း ဦးချပြီး ရော
" ဒကာကြီး အလှူက ရွာမှာသာမက နယ်မှာပါ နာမည်ကြီးနေတယ်၊ဒကာကြီး ရဲ့ ဖောက်သည်တွေကလည်း ဒီနယ်အကုန်ဆိုတော့ "
" မှန်ပါ အမိန့်ရှိပါဘုရား "
" (....) ဆရာတော်ကိုတော့ ပင့်အုံးမှ ကောင်းမယ်၊ သူကြွတာ မကြွတာက သူ့အပိုင်း၊ ပင့်ရမှာက ကိုယ့်တာဝန်ပဲ "
" ရွာရှိ သံဃာကုန်ရယ်၊ ကျန်တာက ဆရာတော် သဘောအတိုင်းပါပဲ ဘုရား "
" (.......)ဆရာတော်ကို ပင့်ပြီဆိုမှတော့ (.......) ကို ချန်ထားခဲ့လို့ကလည်း မကောင်းပြန်ဘူး ဒကာကြီး "
" မှန်ပါ၊ ပင့်ပါဘုရား "
" (.........) ကိုလည်း ပင့်မှကောင်းမယ်၊ သူတို့က ခရီးဝေးပေမဲ့ ပွဲရှိတိုင်း ဘုန်းကြီးတို့ကို ပင့်တယ်၊ ဘုန်းကြီးတို့ကသာ မပင့်နိုင်တာ၊ ဒီတစ်ခါ ပင့်မယ် လို့ စိတ်ကူးရတယ် "
" မှန်ပါ ဘုရား "
"(......) ရွာ ဆရာတော်လေးကလည်း ဘုန်းကြီးအသစ် ကျောင်းအသစ် ဆိုတော့ လာဘ်လာဘ နည်းပါးရှာဦးမယ်။ အဲဒီ ကျောင်းကိုလည်း ချန်ထား လို့ မကောင်းပြန်ဘူး "
" မချန်ပါနဲ့ ဘုရား၊ သံဃာများလေ တပည့်တော်တို့လည်း ဝမ်းသာလေပါ ဘု ရား "
အားလုံးပြီးတော့မှ ဆရာတော်ကို ဦးချပြီး ဦးကျော်သိန်းအိမ်ပြန်သွားတယ်။
အိမ်ရောက်တော့ ဦးကျော်သိန်းက ပြုံးစိစိဖြစ်နေလို့ သူ့ဇနီးက နားလည်ရ ခက်နေတယ်။ ဆရာတော်ဆီ ဘုန်းကြီးပင့်ဖို့ သွားလျှောက်တာ ပြုံးစရာ မပါနိုင်ဘူးပေါ့။
" မယ်ပွေ့ရေ၊ ဘုန်းကြီးပင်ရတာ ခက်မှန်း ငါတော့ အခုမှ သိသဗျာ "
" ဘုန်းကြီးပင်ရတာ ဘာခက်နေလို့တုန်းတော့ "
" ခက်တယ်ဟ၊ ဒီဆရာတော်ကိုတော့ မပင့်လို့ မကောင်း၊ ဒီဆရာတော်ကို ပင့်ပြီး ဟို ဆရာတော်ကိုမပင့်ပြန်လည်း မကောင်း၊ အဲသလိုတွေ ရှိတယ်ဟ၊ ဆရာတော်ကိုတော့ မလျှောက်ခဲ့ပါဘူး၊ ငါ့ စိတ်ထဲမှာတော့လေ "
" ဆက်ပါအုံးတော့ "
" မကောင်းလို့ ပင့်ရတာက များတော့ ကောင်းလို့ပင့်ရတာက ဘယ်နှပါး မှန်းတောင် မသိတော့လို့ပါဟာ " တဲ။
တော်တော်နောက်တဲ့ ဦးကျော်သိန်းပဲ၊ အဲဒီစကားက ဆရာတော်နားကလွဲရင် လူတိုင်းနားထဲ ပြန့်သွားတယ်။ ဒါနဲ့တော့ သူ့ကို မကောင်းပင့် ကျော်သိန်းလို့ မခေါ်ကြသေးပါဘူး။
ရွာမှာ ကျော်သိန်းက နှစ်ယောက်၊ နောက်တစ်ယောက် အငယ်၊ ဒီတော့ ရွာထုံးစံအတိုင်း ကျော်သိန်းကြီး ကျော်သိန်းလေးပဲ ခေါ်ကြတာ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျော်သိန်းလေးက သူချစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးက သူ့ကို ပြန်မချစ်လို့ နင်မချစ်ရင် ငါလည်း ရေနံဆီသောက်သေတော့မယ် ဆိုပြီး ရေနံဆီတွေသောက်ပါလေရော။ သိပ်မများတာရယ်၊ လူသိစောတာရယ်ကြောင့် ကျော် သိန်းလေး မသေလိုက်ရဘူး။
ဒါပေမဲ့ ရွာထဲကတော့ သူ့ကို ကျော်သိန်းလေး လို့ မခေါ်ကြတော့ဘူး၊ "ဘီအိုစီ ကျော်သိန်း " လို့ပဲ ခေါ်ကြတော့တယ်။ သူ့ကို ဘီအိုစီ ကျော်သိန်း လို့ခေါ်တော့ ကျော်သိန်းကြီး ကိုလည်း ကျော်သိန်းကြီးမခေါ်ကြတော့ပဲ
" မကောင်းပင့် ကျော်သိန်း " လို့ ပဲ ခေါ်ကြတော့ တယ်။
တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ ( ယူအက်စ်အေလား ဦးစလား )
in ဇင်ဝေသော်, တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ - on 3/17/2013 - No comments
လက်တင်ဘာသာ လွှမ်းမိုးမှုများဆဲ စပိန်၊ အီတလီ၊ ပေါ်တူဂီ စတဲ့ နာမည်ေ တွနဲ့ အင်္ဂလိပ်နာမည်တွေကို အပျင်းပြေလိုက်ကြည့်မိတယ်။
ဥပမာ ခရစ္စတီယာနို ရော်နာဒို ပေါ့။ " အို " တွေနဲ့ အဆုံးသတ်တယ်။ သူသာ အင်္ဂလိပ် သို့ အမေရိကန်ဆိုရင်....
ခရစ္စတီယာနို က ခရစ်ရှန် ဖြစ်ပြီး ရော်နာဒို က ရော်နယ်လ် ဖြစ်မယ် ( ဥပမာ ရော်နယ် ရီဂင် လိုပေါ့ )
အီတလီနာမည်တွေမှာ အများစု တွေ့ရတတ်တာက " ရော်ဘာတို " ပါ၊ ရော်ဘာတို မန်ချိနီ၊ ရော်ဘာတို ဘာဂျီယို စသဖြင့်ပေါ့။ ရော်ဘာတိုကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောင်းရင် " ရောဘတ် " ဖြစ်သွားမယ်။ အဲလိုနာမည်တွေ အများ ကြီးရှိတယ်။
အင်္ဂလိပ်က လက်တင်ဘာသာက ဆင်းသက်တာဆိုပေမယ့် လက်တင်နဲ့ အလှမ်းနည်းနည်း ဝေးတယ်။ သရ ဆုံး နာမည်တွေကို သိပ် လက်မခံဘူး။
ပြီးရင် မြန်မာစာပြန်ဆရာတွေဖက် လှည့်အုံးမယ်။ နာမည်တွေ မှတ်ထားရပြီး အသံထွက်က မမှန်တော့ နောက်လူတွေ ဒုက္ခရောက်တယ်။
ကမ္ဘာကျော် လူမှုရေးရာ စာရေးဆရာကြီး ဒေး ( လ် ) ကာနယ်ဂျီ။ ကာနယ်ဂျီ လို့ မေးတိုင်း " ကာနယ်ဂီ " ကို ပြောတာလားလို့ အမေးခံရတယ်။ အမှန်က မဂျီပါဘူး။ ဂီ ပါ။
လက်တင်တွေက ဂီသလား မဂီသလား မသေချာပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်မှာတော့ " ဂီ " တယ်။ ဒေး ( လ် ) ကာနယ်ဂီ ပါ။
ဖရန့်စ်ကို ပြင်သစ်လုပ်လိုက်တဲ့ တရားခံက ဘယ်သူလဲဆိုတာ မသိတော့ဘူး ။ တော်တော် ဝေးသွားတာပဲ။
ကျနော်တို့ခေတ်မှာလည်း နာမည်လေး တစ်ခုလောက် မြန်မာမှုပြုရရင်ကောင်းမလားလို့၊ ဥပမာ USA ပေါ့။
အမေရိက လို့ ခေါ်မယ့်အစား ဦးစ လို့ ခေါ်လိုက်ရရင် ပိုပြီးမှတ်ရလွယ်မယ်။ ချရေးရင်တောင် စာလုံးပေါင်း မလွဲနိုင်တော့ဘူး။ ပြင်သစ်ထက်တော့ သာ တယ်။
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 3/16/2013 - No comments
Goodison Park မှာ နေပူမိုးရွာ သူခိုးလာ ဖြစ်နေလေရဲ့ ရွှေခြံ ရေ.........
၁၁ ယောက်ချင်း ကစားတော့ ၂၃ မိနစ်မှာ အိုစ်မန် အဝေးကစ်က မန်းစီးတီး ဂိုးသမား ဟာ့တ် ကိုပါ ကစ်သွားတော့ ...
အယ်ဗာတန် ၁၊ စီးတီး နဲလ် တဲ့။
ဒုတိယပိုင်း ၁၅ မိနစ်လောက်မှာ အယ်ဗာတန်က မြေပဲ ( ပီးနပ် ) အနီ ထိတော့ ( ထိသင့်တယ် ) စီတီဇင်တွေရဲ့ အညိုရင့်လှိုင်းကြီးတွေ တစ်လိမ့် လိမ့်တက်လာလိုက်တာ ရွာတော့မလိုပဲ လေ။
အဲ... လွင့်ထွက်သွားတဲ့ဘောလုံး ဖလိုင်းနီဆီ ရောက်တဲ့အထိပဲ ဆိုပါတော့။
ဖလိုင်းနီက ဂျာဗစ်ကို ချကျွေးလိုက်တော့ ၁၀ ယောက်နဲ့ တော့်ဖီတွေက ၂ စီတီဇင်တွေ ဇီရိုး တဲ့။
အရပ်စကားနဲ့ပြောတော့ အယ်ဗာတန် ၂၊ မန်စီးတီး ၀။
မိုးထဲမှာ မိုးယေးက ရေး လို့ အော်နေလေရဲ့။
လူစိမ်းမှ လူရင်းသို့ ( ၇း၃ )
in Hard Truths By Lee Kuan Yew, ဇင်ဝေသော် - on 3/16/2013 - No comments
လီကွမ်းယု ရဲ့ Hard Truths ကနေ အခုတလော ရေပန်းစားနေတဲ့ စက္ကူဖြူ စီမံကိန်းကို အထိုက်အလျောက် ထင်ဟပ်စေတဲ့ အခန်း ၇ ကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။
မေး ။ ။ စင်ကာပူးရီးယန်းတွေ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်တာ တစ်ခုက သူတို့က PR ကိုသာ ယူပြီး စီတီဇင်ခံယူတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းက တော်ေ တ်ာနည်းနေတဲ့ ကိစ္စပဲ။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါ မှန်တယ်။ ငါတို့လည်း ဒီအတွက် ပူနေရတယ်။
မေး ။ ။ နောက်ထပ်စိုးရိမ်တာက သူတို့မျိုးဆက်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ် လာလေဦးမလားလို့။
ဖြေ ။ ။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒုတိယမျိုးဆက်က ဒီအတိုင်း လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မင်းက PR မှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောင်္ကျားလေးဆိုရင် (၁၈) နှစ် ပြည့်ရင် စစ်မှု ထမ်းရမယ်။ မထမ်းရင် PR ပြုတ်မယ်။
မေး ။ ။ အိန္ဒိယန်း PR တွေနဲ့ စကားပြောကြည့်ဖူးတယ်။ သူတို့ကလေးတွေ စစ်မှုထမ်းက လွတ်အောင် သြစတေးလျကို သွားကြတော့မလို့တဲ့။
ဖြေ ။ ။ သွားကြလေ၊ ပြန်လာလို့တော့ မရဘူး။
မေး ။ ။ အဲဒီတုန်းက သူတို့မှာ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိတယ်လေ။ သူတို့က တစ်ချိန် ချိန်မှာ ဒီကို PR တွေအနေနဲ့ ပြန်လာ၊ အင်ပလွိုင်းမန့် ပါ့(စ်) (Employment Pass) တွေနဲ့ ဒီမှာ အလုပ်လုပ်ကြဖို့။
ဖြေ ။ ။ မရဘူး။ သူတို့ကို ပြန်ဝင်လာခွင့်ကို မပြုဘူး။ တို့မှာ ဥပဒေရှိတယ်။ PR တစ်ယောက်က စစ်မှုမထမ်းဘဲ ထွက်သွားရင် ပြန်လာခွင့်မရှိဘူး။ မင်းက PR၊ မင်းကလေးတွေကို တို့ကျောင်းတွေမှာထား၊ ငါတို့စနစ်ကနေ အကျိုး အမြတ်တွေ ထုတ်ယူ၊ ဒါဆို စစ်မှုတော့ ထမ်းရမှာပေါ့။ ဒီတာဝန် မထမ်းေ ဆာင်ခင် ထွက်သွားလို့ကတော့ ပြန်ဝင်လာခွင့် မရှိဘူး။ ဥပဒေကို တင်းကြပ် ထားမှ ရတယ်။ နို့မို့ လူတွေက အခွင့်အရေး ယူသွားကြမှာ။
ဒါပေမဲ့ လူချမ်း သာ အိန္ဒိယန်းတစ်ချို့က ထွက်သွားပြီး အနှစ် (၂၀) လောက် ကြာရင် ပြန်လာ၊ တို့က သူတို့အတိတ်ကို မေ့သွားမယ်လို့ ထင်ကြတာပါ။ အဲဒါ သူတို့မှားတာပဲ။
အများစုကတော့ သူတို့ကလေးတွေရဲ့ စစ်မှုထမ်းတာဝန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျေ နပ်ကြပါတယ်။ ဒီက အနေအထားကို သူတို့ သဘောပေါက်ကြတယ်။ သူတို့ အိမ်နီးချင်းတွေက ကလေးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ဒီက လူနေမှုအဆင့် အ တန်းမျိုး ရောက်အောင် မျိုးဆက်နှစ်ဆက်၊ သုံးဆက် စောင့်ကြည့်ရဦးမှာ။ ဒါကြောင့် သူတို့က စင်ကာပူမှာ နေရတာကို ကျေနပ်ကြပါတယ်။
မေး ။ ။ ပီအာတွေ စီတီဇင်မယူတာ ဘာကြောင့်လဲလို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ မလေးရှားတွေကို ကြည့်။ သူတို့ စီတီဇင်မယူဘူးဆိုတာက ဟိုမှာ သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ မိသားစုတွေ ရှိတယ်။ လာလိုက်၊ သွားလိုက် လုပ်နေ တာက ပိုလွယ်တယ်။ သူတို့ မိဘတွေ ဆုံးသွားပြီဆိုရင် သူတို့က စီတီဇင် ယူတယ်။
ငါ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကြည့်ရှု့ကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်က အဲဒီအတိုင်းပဲ။ သူ့ဇနီးနဲ့ သူ့ကလေးတွေက ဒီမှာ။ စင်ကာပူ စီတီဇင်တွေ။ ငါတို့ကသာ စီတီဇင်နှစ်မျိုး ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် အခြေအနေက ဒီထက်ဆိုးမယ်။ တို့နိုင်ငံက အမေရိကလောက် မကျယ်ဘူး။
မေး ။ ။ နိုင်ငံခြားသားတွေ တိုးလာတော့ ဒီမှာရှိတဲ့ လူထုနဲ့ အချိုးညီမျှပြီး လူမျိုးရေး ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ဖို့ အခက်အခဲက ဘာများဖြစ်မလဲ။
ဖြေ ။ ။ တိုးလာတဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယတွေရဲ့ အရေအတွက်နဲ့ ညီမျှအောင် မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား မွတ်ဆလင်တွေ ဒီကိုရောက်လာအောင် လုပ်ရ မယ် ။ ပြဿနာက သူတို့ဒီကို ရောက်လာအောင် လုပ်လို့မရတဲ့ အချက် ပဲ။ သူတို့ ဒီကိုလာတဲ့ဦးရေက တော်တော်နည်းတယ်။ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေကိုလက် ခံမယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ သူတို့နဲ့ ပြည့်သွားလိမ့်မယ်။ ပညာတတ်တွေ ကျပြန်တော့လည်း စင်ကာပူကို ဘယ်လာပါတော့မလဲကွာ။ ဟိုမှာက ဒီလောက်လည်း ပြိုင်ဆိုင်နေစရာ မလိုဘူး။ အခွင့်အရေးကျတော့ ဟိုမှာက ပိုရနေတာလေ။
အာရပ်ကမ္ဘာမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ တို့နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေနဲ့လက်ထပ် ထားတဲ့ အာရပ်အနည်းအကျဉ်းတော့ ဒီကိုလာတယ်။ သူတို့က စင်ကာပူဟာ သိပ်မဆိုးတဲ့နေရာလို့ ထင်ကြတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ပညာတတ် ခင်ပွန်းကို စင်ကာပူထဲခေါ်လာတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တို့က မတားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီအရေအတွက်က နည်းနည်းလေးပါ။
မလေးရှားခေါင်းဆောင်တွေက ဒီအခြေအနေကို သဘောပေါက်ကြတယ်။ မလေးမွတ်စလင်တွေ ဒီထက်ပိုများများ စင်္ကာပူမှာ အခြေချနေထိုင်ကြဖို့ ငါ တို့ ကြိုးစားနေကြောင်း သူတို့ကို ပြောပြတယ်။ တချို့ မွတ်စလင် ပညာ ရှင်တွေ MNS တွေက တာဝန်ပြောင်းချပေးလို့ ဒီကို ရောက်လာကြတာတွေ ရှိတယ်။ ရောက်လာရင် သူတို့ကလေးတွေကိုလည်း ခေါ်ပြီး ဒီကကျောင်းေ တွမှာ ထားကြတယ်။ တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ သူတို့ ပြန်ရတဲ့အခါမှာတောင် သူတို့ ကလေးတွေကို ဒီမှာ ချန်ထားတတ်ကြတယ်။ တို့က ပိုလို့တောင် ကြိုဆိုသေး တာပေါ့။
အိန္ဒိယလူဦးရေကတော့ လူတော်လေးတွေ ဒီမှာလာပြီး နေကြတော့ တိုး လာနေ တယ်။ သူတို့ အရင်းအမြစ်ကိုကြည့်။ လူဦးရေ သန်းနှစ်ရာကျော်ထဲ မှာ ပညာတတ်တွေ အများကြီးပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့က အင်္ဂလိပ်လိုသင်ပြီး ဘွဲ့ ရခဲ့ကြတာ။ ခရစ်ကက်လည်း ကစားကြတယ်။ ဒီတော့ တို့အားကစား အမျိုး အစား ထဲမှာတောင် အမျိုးအစား အသစ်တစ်ခု တိုးသွားတာပေါ့။
ဒီမှာ အိန္ဒိယကျောင်း သုံးကျောင်းရှိတယ်။ ငါသာ မတားရင် ဒီထက်ပိုပြီး များ စရာ ရှိတယ်။ စင်္ကာပူကျောင်းကို တက်ချင်တက်၊ မတက်ရင် အိန္ဒိယကိုပြန် လို့ ငါပြောခဲ့တာ။ PR အနေနဲ့နေ၊ စစ်မှုထမ်းပေမယ်လို့ သူတို့ အသိုင်းအ ဝန်းလေးထဲမှာ နေပြီး ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ မပေါင်းမိဘူး။ ဒါကြောင့်။
ငါတို့က ဥပဒေထုတ်ဖို့တောင် စဉ်းစားနေတာ။ အလယ်တန်း သက်တမ်း တလျှောက်လုံး အိန္ဒိယန်းကျောင်းမှာပဲ တက်လာခဲ့ရင် PR မပေးဘူး ဆိုတာ မျိုး။ သူတို့ကျောင်းမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ စာအုပ်က အားလုံးလိုလို အိန္ဒိယ အကြောင်းတွေချည်းပဲ။ ဒါကြောင့် အိန္ဒိယကိုပဲ ပြန်သွားရမယ်။ သူတို့ ဗဟုသု တက အိန္ဒိယဗဟုသုတပဲ ရှိတယ်။ ဒီတော့ ခံစားချက်ကလည်း အိန္ဒိယန်းတွေ ရဲ့ ခံစားချက် ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါ ပြဿနာ။
မေး ။ ။ လတ်တလော တရုတ်သတင်းစာက ဦးဆောင်စည်းရုံးတဲ့ အခမ်း အနားတစ်ခု ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီ အခမ်းအနားမှာတော့ အခုမှ ရောက်လာတဲ့ စီ တီဇင်အသစ်တွေက သူတို့အတွက်၊ သူတို့ကလေးတွေအတွက် ဒီလို အခြေအနေမျိုးရအောင် ခေါင်းဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့ မစ္စတာလီရဲ့ကျေးဇူး ကြီးမားကြောင်း ပြောဆိုကြတာ တွေ့ရတယ်။ မစ္စတာလီရဲ့ မှတ်ချက်အရ လက်ရှိ စင်္ကာပူရီးယန်းတွေက ကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှန်း မသိကြဘူးဆိုလား။
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ သဘာဝပဲ။ ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းရင်းက စီတီဇင် အ သစ်တွေက မတူတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ရောက်လာကြတာ။ တရုတ်ပြည် ကဖြစ်ဖြစ်၊ အိန္ဒိယကပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ စင်္ကာပူရောက်ပြီး သူတို့ဘဝက ချက်ချင်း ကြီး တိုးတက်သွားတာကိုး။ တို့က စင်္ကာပူးရီးယန်းတွေအတွက်ကျတော့ ဒါ က ဘာမှ မထူးဆန်းသလို ထူးပြီးလည်း မခံစားကြရဘူး။ သူ့ကလေးအတွက် လက်ရှိရနေတာတွေဟာ သဘာဝအရကို ရနေတာလို့ ထင်နေတာ။ ဒါကလုံး လုံး အလွဲကြီး။
သဘာဝအရ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မတုန်း။ တစ်ခုခုများ တိမ်းချော်သွားခဲ့ ရင် အောင်မြင်နေတာတွေအားလုံး ပျောက်ဆုံးပြီး အောက်ဆုံးအထိ ကျ သွားနိုင်တယ်။ ငါတို့ နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုဆို၊ သံဓိဋ္ဌာန်တွေ ပြုကြတယ်။ တကယ်က “နိုင်ငံတော်” အဆင့်ကို ရောက်အောင် ကြိုးစားနေကြရတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ “နေးရှင်း” တစ်ခုမဟုတ်သေးဘူး။ နောက် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာဆို ရင်တော့ နေးရှင်း ဖြစ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့။
အမေရိကဆိုရင် သက်တမ်း နှစ်ရာ့ငါးဆယ်ကျော်ပြီ။
သူတို့လည်း နေး ရှင်းဖြစ်ပြီလို့ ငါတော့ မယုံကြည်သေးဘူး။ မှန်တယ်။ သူတို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ လူဖြူတွေရော၊ လူမည်းတွေရော အတူတူတွဲပြီး တိုက်ခဲ့ ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ အတူ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ စစ်ပွဲလည်း ပြီးရော လူဖြူက လူဖြူနေရာ၊ လူမည်းကလူမည်းနေရာ ပြန်ေ ရာက် သွားရော။
ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေ ကြားမှာကိုပဲ ငါတို့ တအား ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ လူတွေကို နေရာရွေ့ပြောင်း ပေးပြီး အမြန်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့နည်းကို ကြိုး စား ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်သာ အောင်မြင်ခဲ့ရင် ဒီနေ့စင်္ကာပူနဲ့ တခြားစီ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
မလေးရှားက နည်းတစ်မျိုးနဲ့ ခရီးသွားတယ်။ သူတို့ဆီမှာ လူမျိုးစုတွေက လုံး ဝ ကို တသီးတသန့်ဆီ။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယန်း၊ မလေး သူ့အုပ်စုနဲ့သူ။ ထိပ်တန်း စီးပွားရေး လောကထဲမှာကိုပဲ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံမှု မရှိဘူး။ ကွဲပြားနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းပဲ။ အဲဒါ နေးရှင်းလား။ လုံးဝ မဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ကရော နေးရှင်းလား။ ကူးပြောင်းနေတယ်။
ခေါင်းဆောင်က သူ့ဆက်ခံသူကို ချမှတ်ပေးလို့ပဲ ရတယ်။ နောက်ပိုင်းကိစ္စက သူ့ကို ဆက်ခံသူနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။
စတာလင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ခရုရှက်(ဖ်)က စတာလင်ရဲ့မူဝါဒတွေအားလုံး ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။
ခရုရှက်(ဖ်)လည်း သွားရော Brezhnev (ဘရက်ညဇက် ) က တခြားပုံစံနဲ့ ခရီးဆက်ပြန်ရော။
Brezhnev က အသက်ရှစ်ဆယ်လောက် ရောက်တော့ Andropov (အန်ဒရိုပေါ့) ကို အာဏာလွှဲပေးတယ်။
Chernenko (ချာနင်ကို) သေတော့ ဂေါ်ဘာချော့(ဗ်)က ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးကို ဖြိုခွဲပေးလိုက်တယ်။
သူတို့က နေးရှင်း မဟုတ်ဘူး။ အင်ပါယာပဲ။
တရုတ်ပြည်က နေးရှင်းလား။ ဟုတ်တယ်။ ဟန်လူမျိုးက တရုတ်လူဦးရေရဲ့ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်။ နှစ်ငါးထောင်ကြာတဲ့ သမိုင်းရှိတယ်။
ဒါဆို Xinjian (ရှင်ကျင့်) နဲ့ တိဗက်တို့က ဘယ်လိုလဲ။
အဲဒီပြည်နယ်နှစ်ခုကို ဟန်လူမျိုးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး နေးရှင်းလုပ်မလို့ ကြိုးစားနေ ကြတာ။ လူမျိုးစုံတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းကတော့ ဒီပြဿနာမျိုးကို ရင်ဆိုင်ရတာပါပဲ။
၅၃ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် ( ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို ချိန်တဲ...
Precious Mirror Samadhi Song (သမာဓိ အမြုတေ မှန်တေး...
ဖရီးသင့်ကား ( Free Thinker ) များလာရခြင်း အကြောင်း...
တန်ရာ တန်ကြေး (အထူးကုဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ မိဘမေတ...
သေတာတောင် Gangnam Style နဲ့
လုပ်ချင်ရာ လုပ်ရရင် ပျော်တာပဲ (သိပ္ပံတဲ့လား … ပျင်း...
ဂျိမ်းစ်ဘွန်း တိုင်တန်းနစ်နဲ့ ဘောလီးဝုဒ်
တတိယအကြိမ်မြောက် လောကချမ်းသာ သဲပုံစေတီတည်ထားကိုးကွ...
အန်ကယ်က သဘောကောင်းတယ် တဲ့လား
လူပီသဖို့ ငိုရမယ် ၃ (I cry, therefore I am)
လူစိမ်းမှ လူရင်းသို့ ( ၇း၂ )
တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ ( ဘောလုံး )
တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ ( ပီအိတ်ခ်ျဒီ ကိစ္စ )
“လူစိမ်းမှ လူရင်းသို့ (၇း၁)”
“လူပီသဖို့ ငိုရမယ် ၂ (I cry, therefore I am)”
နောက်ပိုင်း မသေချာတဲ့ သတင်းနှစ်ပုဒ်
“လူပီသဖို့ ငိုရမယ် (I cry, therefore I am)”
စူပါများကြား ရပ်တည်ခြင်း ( ၈:၄ )
စကားနှစ်ခွန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ( Elite နဲ့ တပ်မတော် )
လရိပ်ရယ်သံ ( မန်းကိုလွမ်းလို့ တမ်းတဲ့ စာ ၅ )
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ လူဦးရေ လျော့တော့ ပတ်ဝန်းကျင်း ...